ရန်ကုန်တိုင်း၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာတရားသဘင် ကျင်းပရန်အတွက် အခမ်းအနားပြင်ဆင် ပြီးသွားမှ တိုင်းညွန်ကြားချက်ဖြင့် မြို့နယ်မှ အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူများမှ လာရောက်တားဆီးပိတ်ပင် ဖျက်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။ ဟောကြားမည့်ဆရာတော်မှာ ဆရာတော်ဥူးသုမင်္ဂလဖြစ်ပါသည်။ အခမ်းအနားကို လုံးဝ ဖျက်သိမ်းပစ်ရပါမည်ဟု အုပ်ချုပ်သူများလာရောက်ပြောဆိုနေသောအချိန်တွင်
မီးသတ်များ၊ နှင့် စွမ်းအားရှင်များသည် နံပါတ်တုတ်(ရာဘာ)များကိုင်ဆောင်ထားသည် ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ဗွီနိုင်းများကိုလည်း ဆွဲစုတ်ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါသည်။ တရားဟောရန်လူများပြည့်နှက်နေ သည့်အချိန်မှ တရားဟောခွင့်မရှိကြောင်းလာပြောပြီး မီးသတ်ဝတ်စုံအသစ်များဖြင့် တုတ်များကိုလက်ဖြင့်ဆပြီး ခြိမ်းခြောက်မှုများလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပရိသတ်များအားလုံးမှာလည်း တရားပွဲရရှိရန် အလွန်ကြိုးစားပြီးမှ အခုလိုတရားပွဲပျက်သွားရခြင်းအပေါ် အလွန်ဝမ်းနည်းခံစားရကြောင့်း မျက်ရည်များလည်၍ပင်ပြောကြား ကြပါသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာ ဆရာတော်အား သံဃာနာယကအဖွဲ့မှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် သတိပေးပြီးနောက် ဖြစ်ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်မှာ တရားဟောပြီး ရရှိသော ဓမ္မပူဇာများဖြင့် ပရဟိတလုပ်ငန်းများကို အကုန်ပြန်လည်လှူဒါန်းနေသော ဆရာတော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပရဟိတလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်လည်း အလွန်နစ်နာသောဖြစ်ရပ်လည်းဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်ရှိ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြုံတွေ့ရာနေရာများကိုလည်း ဆရာတော်သည် ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ လှူဒါန်း ပေးနေသောဆရာတော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါဆရာတော်တစ်ပါးအား တရားပွဲမဟောရန် တားမြစ်ခြင်းသည် ယခုဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများဖြင့်လည်း အလွန်သွေဖယ်နေသော လုပ်ရပ်လည်းဖြစ်ပါ သည်။ ကောင်းမွန်သော အခြေအနေများကိုလည်း ဖျက်ဆီးပစ်သောဖြစ်ရပ် တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါ သည်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပရဟိတလုပ်ငန်းများနှင့် ဆရာတော်အားကြည်ညိုကြသော တရားနာပရိတ်သတ်များ သည် အလွန်မကျေမချမ်းဖြစ်ကာ ၀မ်းနည်းကြေကွဲနေရပါသည်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကြောင့် ယခုအုပ်ချုပ်နေသော အစိုးရသည် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်အမည်တပ်ကာ စတိတ်ရိုးများ၊ လောင်းကစားဝိုင်းများ၊ အခြားသော ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများကို ခွင့်ပြုချက်များပေးကာ ယခုလို တရားပွဲစစ်စစ်များကို ဂုဏ်သိက္ခာမရှိတား ဆီးနှောက်ယှက်မှုများပြုလုပ်ခြင်း သည် နိုင်ငံတော် သစ်ဆီသို့လှမ်းနေသောခြေလှမ်းများအား ယုံမှားသံသယရှိဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, November 26, 2011 Links to this post
ညဈေးတန်း ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်တွေကိုယ်စား တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးမြင့်နိုင်နှင့် အထက် တန်းရှေ့နေ ဒေါ်ဇင်မိုးထိုက်တို့က ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေပါ ပုဒ်မ-၃၅၆၊၃၅၇ * နှင့် ခုခံချေပသွားမယ်ဆိုပြီး စည်ပင်မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြတ်စိုးထံသို့ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်နေ့က စာပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။
ဦးဌေးက ဧည့်စာရင်းတိုင်ခွင့် မရလို့ ပြန်လာတဲ့အခါ ညဈေးတန်းဆိုင်ခန်း တွဲတွေမှာ နေထိုင် တဲ့မိသားစုတွေက အောက်တိုဘာ ၁၉ရက်နေ့ည တစ်ညလုံး စာတိုက်ဟောင်းလမ်းပေါ်မှာ ဧည့်စာရင်း လာစစ်မှာ ကြောက်လို့ ထွက်ထိုင်နေကြရပါတယ်။ “ကိုဌေးဝင်းကပေါ့ ဧည့်စာရင်းလဲသွားတိုင်ရော ငါတို့ကို ဧည့်စာရင်းမပေးဘူးတဲ့။ အဲဒီတော့ ငါတို့မအိပ်ရဲဘူးပေါ့နော်။ တစ်ညလုံးလမ်းမှာထိုင်နေရတယ်။ ဧည့်စာရင်းလာစစ်ရင်ဖမ်းမှာဆိုးလို့။ တစ်တန်းလုံးပေါ့ဗျာ အဲဒီလိုပဲညတုန်းကဆို ကျနော်လဲပါတာပေါ့ ကျနော်လဲဘယ်အိပ်ရတော့မလဲ။ တညလုံး အလင်းရောင်အောက်မှာထိုင်နေရတယ်။” လို့ ညဈေးတန်း ဆိုင်ခန်းတွဲတွေမှာ ၁၅နှစ်ကျော်ကြာ နေထိုင်လာခဲ့သူ ဦးပုက ဘားမားဗီဂျေကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်ပြည်မှ ဗုဒ္ဓစွယ်တော် နိုဝင်ဘာလ(၆)ရက်နေ့က နေပြည်တော် ဥပ္ပါတသန္တိ စေတီတော်တွင်း ပူဇော်ထားရှိစဉ် မြင်ကွင်း ဓာတ်ပုံများ
ဓာတ်ပုံများပေးပို့ ပေးသော ဒီမိုဝေယံ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
ပါတီဝင် လျှောက်လွှာပုံစံများကို ပုံနှိပ်ရန် ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကာ လာမည့်အပတ်အတွင်း တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် အားလုံးသို့ ဖြန့်ဝေသွားရန်ရှိသည်ဟု ပါတီထူထောင်ရာတွင် ပါဝင်သူတဦးဖြစ်သည့် ဒေါ်မေဝင်းမြင့်က ပြောသည်။ လက်ရှိ ပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှအစ ပါတီဝင်လိုသူများအားလုံး လျှောက်လွှာတင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဒေါ်မေဝင်းမြင့်က ပြောသည်။
"လျှောက်လွှာတင်တယ်ဆိုတာ အန်တီတို့က အဟောင်းကို လုပ်တာမဟုတ်ဘူး၊ အန်တီတို့ကအစ ဒေါ်စုတို့က အစ ပါတီ လျှောက်လွှာအသစ်ကို ပြန်တင်ပြီးတော့ အန်တီတို့လျှောက်ရမှာ။" ဟု မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ပါတီဝင်လျှောက်လွှာပုံစံတွင် အသက်၊ ပညာအရည်အချင်း လူမျိုး၊ ဘာသာနှင့် နေရပ်လိပ်စာ တို့ပါဝင်မည်ဟုလည်း ပါတီထူထောင်သူတဦးဖြစ်သည့် ဒေါ်ခင်မိုးမိုးက ပြောသည်။ NLD ၏ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ကူညီနေသူ တဦးဖြစ်သည့် ကဗျာဆရာ ကိုငြိမ်းသစ်က ပါတီဝင်များ၏ အရည်အချင်းသည် ဒီမိုကရေစီအရေးတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခြင်းဖြင့်ပင် လုံလောက်သည်ဟု သုံးသပ်သည်။
"သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရည်အချင်းတော့ မရှိပါဘူး၊ တက်ကြွစွာ ရိုးသားစွာ ဒီမိုကရေစီအရေးမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်မယ် ဆိုရင်ပဲ လုံလောက်ပါပြီ။ အဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ မည်သူမဆို ဝင်ခွင့်ရမှာပါပဲ။" ဟု ကိုငြိမ်းသစ်က မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ပါတီဝင်လိုသူများအနေဖြင့် လျှောက်လွှာပြန်တင်ရမည် ဖြစ်သော်လည်း ပါတီဝင်ဟောင်းနှင့် ပါတီဝင်သစ် ခွဲခြားမည် မဟုတ်ဘဲ ပါတီဝင်အသစ်များသည်လည်း သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံပါက လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ခွင့်ရှိသည်ဟု ပါတီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ဒေသံခံ၊ တိုင်းရင်းသား၊ အမျိုးသမီးနှင့် ပညာအရည်အချင်းတို့ကိုကြည့်ကာ ဦးစားပေး ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
သောကြာနေ့တွင်လည်း NLD ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက် သီချင်းများစပ်ဆိုရေးသားသွားနိုင်ရန် အနုပညာရှင် ၅ဝ ကျော်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြသေးသည်။ တေးရေးဆရာတဦးဖြစ်သည့်
"ကျနော်ကတော့ NLD ပါတီဝင်မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် အမေစုကို ကူညီမှာပဲလေ၊ သူ့ကိုတော့ ကျနော်က ယုံကြည်တာပဲ၊ သူကိုယ်တိုင်က လုပ်ပေးပါဆိုရင်တော့ ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမှာပဲ။" ဟု ကိုရဲလွင်က ပြောသည်။
အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း​ခွင့်​ကို ​ကော်မရှင် လက်ခံ
အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ်ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း​ခွင့်​ ပြုဖို့​အတွက် ပြည်​ထောင်စု​ရွေး​ကောက်ပွဲ​ကော်မရှင်က လက်ခံလိုက်တယ်လို့​ သိရပါတယ်။
ဒီက​နေ့​ မနက်ပိုင်း​ ၁၀ နာရီခွဲ​လောက်က ​နေပြည်​တော်မှာ ​ရောက်​နေတဲ့​ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်မှု​ဆောင်အဖွဲ့​ဝင် ဦး​ဉာဏ်ဝင်း​တို့​က အဖွဲ့​ချုပ် ပြန်လည်ဖွဲ့​စည်း​ရေး​အတွက် ပြည်​ထောင်စု​ရွေး​ကောက်ပွဲ ​ကော်မရှင်ကို သွား​ရောက် ​လျှောက်တင်ရာမှာ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း​ရေး​ကို လက်ခံလိုက်တယ်လို့​ အဖွဲ့​ချုပ်က တာဝန်ရှိသူတဦး​ဖြစ်တဲ့​ ဦး​ဟန်သာမြင့်​က ​ပြောပါတယ်။
“၁၀ နာရီခွဲက တင်လိုက်​တော့​ ဖြတ်ပိုင်း​ရတယ်။ လက်ခံဖြတ်ပိုင်း​ရတာ​ပေါ့​ ​ကော်မရှင်က ဆက်တယ်။ အတည်ပြုတာမဟုတ်ဘူး​ သူက ​လျှောက်လွှာကို လက်ခံလိုက်တယ်​ပေါ့​ဗျာ။ သူ့ ပုံစံ​တွေ ဘာ​တွေ မှန်တယ်​ပေါ့​။ ကျ​နော်တို့ တင်တဲ့​ပုံစံမှန်လို့​ လက်ခံတဲ့​ သ​ဘောပါပဲ။”
အဖွဲ့​ချုပ်ကို ပြန်လည် ဖွဲ့​စည်း​ခွင့်​ပြုပြီး​တဲ့​ ​နောက်ပိုင်း​မှ ပါတီမှတ်ပုံတင်ရမယ်လို့လည်း​ ဦး​ဟန်သာမြင့်​က ​ပြောပါတယ်။
လော​လောဆယ်​တော့​ ပါတီပြန်လည်ဖွဲ့စည်း​ခွင့်​ကို​တော့​ တိုင်း​နဲ့​ပြည်နယ်က အမျိုး​သား​ ၁၀ ဦး​နဲ့​ အမျိုး​သမီး​ ၁၁ ဦး​ စုစု​ပေါင်း​ ၂၁ ဦး​နဲ့ တင်​လျှောက်လိုက်တာပါ။
အဲဒီ ၂၁ ဦး​ဟာ ပါတီပြန်လည် ဖွဲ့စည်း​ရေး​အတွက်ပဲ အမည်စာရင်း​နဲ့​ ​လျှောက်ထား​တာဖြစ်ပြီး​တော့​ ​နောက်လာမယ့်​ ပါတီရဲ့​ ဖွဲ့စည်း​ရေး​နဲ့​ မသက်ဆိုင်ဘူး​လို့​ အဲဒီ ၂၁ ဦး​မှာပါဝင်တဲ့​ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဦး​စီး​အဖွဲ့​ဝင် ကရင်ပြည်နယ်က ​ဒေါ်နန်း​ခင်​ထွေး​မြင့််​က ​ပြောပါတယ်။
လော​လောဆယ်အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုမှာ​တော့​ ​ရွေး​ကောက်ပွဲ​အောင်နိုင်​ရေး​ဗဟိုနဲ့​ တိုင်း​နဲ့​ပြည်နယ်အဖွဲ့တွေကို ဖွဲ့​စည်း​သွား​မှာဖြစ်ပြီး​ ​ရွေး​ကောက်ပွဲ ​နောက်ပိုင်း​မှ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုဦး​စီး​အဖွဲ့ကို ပြန်လည်ဖွဲ့​စည်း​သွား​မယ်လို့ ​ဒေါ်နန်း​ခင်​ထွေး​မြင့်​က ရှင်း​ပြပါတယ်။
“​ရွေး​ကောက်ပွဲ ​အောင်နိုင်​ရေး​ပြီး​မှ အခုက ​အောင်နိုင်​ရေး​ပဲ အဓိက​လေ။ ​အောင်နိုင်​ရေး​ပြီး​တော့​ ​ရွေး​ကောက်ပွဲ ဝင်လိုက်မယ်။ ​ရွေး​ကောက်ပွဲပြီး​မှပဲ ကျမတို့​က မူလရှိထား​တဲ့​ အ​ဟောင်း​အတိုင်း​ပဲ ​နေမယ်။ အရင်အ​ဟောင်း​အတိုင်း​ပဲ။ စီအီး​စီလည်း​ အရင်အ​ဟောင်း​ အတိုင်း​ပဲ စီစီ​တွေလည်း​ အရင်အ​ဟောင်း​ အတိုင်း​ပဲ ရှိ​နေတယ်​ပေါ့​နော်။ မြို့နယ်စည်း​တွေ၊​ ပြည်နယ်စည်း​တွေလည်း​ အရင်အ​ဟောင်း​အတိုင်း​ပဲ။ ဘာမှ တိုး​တာ ​လျှော့​တာ အသစ်​တွေ လက်မခံနဲ့​ဦး​။ ​ရွေး​ကောက်ပွဲ ပြီး​တဲ့​အခါကျမှ ကျမတို့​က ကိုယ့်​မြို့နယ်​တွေမှာ ပြန်ပြီး​တော့​စ။ အခု ပါတီဝင်​တွေ​တော့​ လက်ခံ​ပေါ့​။ ပါတီဝင်လက်ခံဆိုတာလည်း​ ​လျှောက်လွှာ​တွေက ရုံး​ချုပ်က ပို့​မှာ။ ရုံး​ချုပ်က ပို့တာကိုပဲ ​စောင့်​ရမှာ လကုန်​လောက်မှ ရမှာ။”
အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ်က ပါတီပြန်လည်ဖွဲ့စည်း​ခွင့်​ကို ​လျှောက်ထား​ပြီး​ လာမယ့်​ ကြား​ဖြတ်​ရွေး​ကောက်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ဖို့​ ပြင်ဆင်​နေ​ပေမယ့်​ ပြည်သူလွှတ်​တော် ဥက္ကဌ ဦး​သူရ​ရွှေမန်း​က​တော့​ ကြား​ဖြတ်​ရွေး​ကောက်ပွဲကို လာမယ့်​ ၃လအတွင်း​ ကျင်း​ပနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး​လို့​လည်း​ ဒီက​နေ့​ ​နေပြည်​တော်မှာ သတင်း​ထောက်​တွေကို သီး​ခြား​တွေ့​ဆုံစဉ်မှာ ​ပြောကြား​လိုက်တယ်လို့​ သိရပါတယ်။
လွပ်လပ်သန့်ရှင်းသော တရားရေးမဏ္ဍိုင် ပေါ်ပေါက်စေရန် ဥပဒေသမားများ အဂတိတရား ကင်းရှင်းဖို့လို
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေရေးရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရာ၌ လွတ်လပ်သန့်ရှင်းသော တရားရေးမဏ္ဍိုင် ပေါ်ပေါက်စေရန် ဥပဒေသမားများ အပါအ၀င် အစိုးရ၀န်ထမ်းပြည်သူများအကြား အဂတိတရား ကင်းရှင်းစေရန် အထူးလိုအပ်ကြောင်း ဥပဒေရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူတို့က သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာနိုင်ငံ တွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရန် လွတ်လပ်သန့်ရှင်းသော တရားရေးမဏ္ဍိုင်လိုအပ်ကြောင်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ် မြောက်ခြင်း တစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနား၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
“သန့်ရှင်းတဲ့ တရားရေးမဏ္ဍိုင်ပေါ်ပေါက်ဖို့ လာဘ်ပေး၊ လာဘ်ယူမှုတွေ ကင်းရှင်းမှရမယ်။ တရားရေးမှာ မတရားမှုတွေရှိခဲ့ရင် တရားရုံးနဲ့ ပတ်သက်သူ အပါအ၀င် အနီးကပ်ကြီးကြပ်သူတွေအထိ အရေးယူမယ်လို့ တရား သူကြီးချုပ်က လွှတ်တော်မှာ ပြန်ဖြေဖူးတယ်။ ဒီကိစ္စတွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အရေးကြီးဆုံးက တရားသူကြီး တွေပဲ” ဟု လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က ဆိုသည်။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်ခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယုံ ကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူများ လွှတ်ပေးရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ တိုးတက် ရေး၊ ပြည်သူများ စိတ်လုံခြုံရေးတို့အတွက် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးမှာ အဓိကအရေးကြီးကြောင်း၊ ဥပဒေစိုးမိုးရန် တရားရေးမဏ္ဍိုင်၏ လွတ်လပ်မှု၊ မှန်ကန်မှုပေါ်တွင် မူတည်ကြောင်း၊ လွတ်လပ်သန့်ရှင်းသော တရားရေးမဏ္ဍိုင် မရှိခြင်းကြောင့် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူများ အကျဉ်းထောင်ထဲရောက်ခြင်းဖြစ်နေကြောင်း ပြော ကြားခဲ့သည်။
“ဗိုလ်ချုပ်က ပြောခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေးက ညစ်ထေးတာမဟုတ်ဘူး။ ညစ်ပတ်သူတွေကသာ နိုင်ငံရေးကို ညစ် ထေးအောင်လုပ်တာပါ.။ ဒီလိုပဲ ဥပဒေက မသန့်ရှင်းတာ မဟုတ်ဘူး။. ဥပဒေသည် ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုပါ။ မသန့် ရှင်းသူတွေကသာ ဥပဒေကို မှားယွင်းအသုံးပြုနေလို့ မသန့်ရှင်းဘူးလို့ စွပ်စွဲပြောဆိုခံရတာပါ.။ လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်တွေမကောင်းရင် လွှတ်တော်တစ်ခုလုံး ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ လွှတ်တော်မကောင်းရင် အစိုးရအဖွဲ့ ကောင်းအောင် လုပ်ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ခက်ခဲမှာပါ။ တကယ်တော့ ဥပဒေက သန့်ရှင်းပြီးသားပါ။ သန့်ရှင်းတဲ့ ဥပဒေကို ဖော်ဆောင်နေတဲ့ ဥပဒေအရာရှိတွေဖြစ်ဖို့က သူတို့နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ လစာတွေပေါ်မှာ မူတည်နေတဲ့အတွက် အများကြီးကြိုးစားရဦးမှာပါ” ဟု စီးပွားရေးနှင့် ဥပဒေအကြံပေးဦးတင် သန်းဦးက ပြောပြသည်။
လွတ်လပ်သန့်ရှင်းသော တရားရေးမဏ္ဍိုင်တစ်ရပ်မရှိပါက နိုင်ငံအတွင်း ဒုစရိုက်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများ၊ ဥပဒေအပေါ် လက်တစ်လုံးခြား အသုံးချမှုများ ပေါ်ပေါက်ကာ အဆုံးတွင် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး၏ လုံခြုံမှုအပေါ် ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း ဥပဒေရေးရာ ၀န်ထမ်းများက သုံး သပ်ကြသည်။
“ရဲတွေအနေနဲ့ မှုခင်းမဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ ပြည်သူကို အသိပညာပေးရေးကို လုပ်နိုင်မယ်။ ဒါ့ပြင် အေးချမ်းလုံခြုံရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရတယ်။ မှုခင်းက အချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကိုပဲ ရဲကလုပ်နိုင်မယ်။ ပြည်သူကလည်း ဥပဒေ ကို နားလည်ဖို့ လေ့လာထားရမယ်။ နားမလည်ရင် ဥပဒေနားလည်သူတွေရဲ့ လိမ်ညာလှည့်ပတ်တာကို ခံ ရမယ်။ နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်တွေ တည်တံ့ခိုင်မာ ဖို့လိုသလို အများပြည်သူ လက်ခံယုံကြည်တဲ့ လွတ်လပ်စွာတရားစီရင်ကြားနာနိုင်မယ့် ဥပဒေတွေလိုတယ်” ဟု ကျောက်တံတားရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒ်ီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်တစ်ခုအဖြစ်ဖို့ အသွင်ပြောင်းလဲနေချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ လယ်၌ ဒါရိုက်တာတစ်ဦး အသတ်ခံရခြင်း၊ မြောက်ဥက္ကလာ၌ အုပ်စုဖွဲ့ဝိုင်းဝန်းသတ်ဖြတ်သည့် ကိစ္စရပ်များ ဖြစ် ပွားခြင်းများသည် နိုင်ငံတော်အတွက် အကျည်းတန်စေကြောင်း တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးဝင်းရွှေ က ပြောသည်။
“အမှုအတွက် မသင်္ကာသူကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး တရားရုံးတွေက ပိုင်နိုင်ခိုင်မာအောင် အမှုတည်ဆောက်ရ မယ်။ တရားသူကြီးက ထိရောက်ပြီး ဘက်မလိုက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကို ချမှတ်ရမယ်။ တရားခံအသစ်ကို သက်သေအ ထောက်အထားနဲ့ ဖော်ထုတ်ပြီး ထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကို ချမှတ်ရင် မတော်မတရားအမှုတွေ ပပျောက်မယ်” ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြောပြသည်။
ဥပဒေအရာတွင် နိုင်ငံသားအားလုံး တန်းတူခံစားခွင့်ရရှိရန် အကာအကွယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ တရားရေး မဏ္ဍိုင်ကိုလည်း ခိုင်ခံ့အောင် တည်ဆောက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုသည် လူတစ်ဦးချင်း ထိ ခိုက်စေသည်သာမက နိုင်ငံနှင့်လူမျိုး၏ ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါ ထိခိုက်စေသည့်အတွက် ပြည်သူများ၏ အကူအညီကိုရ ယူပြီး ထိရောက်စွာတားဆီးသွားမည်ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့က ကျင်းပသည့် ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မိန့်ခွန်းပြောရာ၌ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“တရားရေးမဏ္ဍိုင် သန့်ရှင်းဖို့၊ ဥပဒေရဲ့အထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိဖို့အတွက် တရားရေးရာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးပြေလည်ဖို့လိုတယ်။ တရားသူကြီးတွေရဲ့ လစာက စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေနိုင်ရင် လာဘ်စား ကြမှာပဲ။ တချို့ကြတော့ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမဲ့ လာဘ်စားတယ်။ ဒါတွေပြင်ဖို့အတွက် ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ လစာ၊ အသုံးစရိတ်လောက်ငအောင် လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဖို့ အတွက်ကတော့ အချိန်ယူ ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှရမယ်။ စိတ်ဓာတ်တွေကောင်းလာအောင် တဖြေးဖြေးပြင်ရမယ်။ အဲဒီမှာ ထိရောက်တဲ့ အရေး ယူဆောင်ရွက်မှုလုပ်ဖို့ လိုတယ်။ လာဘ်ပေးတဲ့သူမရှိအောင် လုပ်ဖို့လိုသလို၊ လာဘ်ယူတဲ့သူကိုလဲ မယူအောင် ပြောရမယ်။ ဒါမှ လွတ်လပ်သန့်ရှင်းတဲ့ တရားရေးမဏ္ဍိုင်ဖြစ်မယ်” ဟု တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ ဦးဇော်လင်းက ပြော သည်။
တရားရေးမဏ္ဍိုင် သန့်ရှင်းရန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ကြိုးစားနည်းတစ်ခုမှာ ဥပဒေအထောက် အကူအဖွဲ့ ထူထောင်ထားပြီး နိုင်ငံရေးသာမက ပြည်သူအားလုံး တရားဥပဒေရှေ့မှောက်တွင် တရားမျှတသော စီ ရင်ချက်ရရန် ကူညီသည့်နည်းဖြင့် တရားရေးမဏ္ဍိုင်ခိုင်မာအောင် ကြိုးပမ်းနေ ရာ ပြည်သူများဘက် ကလည်း ထောက်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထောက်ပြမှသာ အစိုးရဘက်မှ ပြောင်းလဲရမည့် အချက်များ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လွတ်မြောက်ခြင်း တစ်နှစ်ပြည့်အခမ်း အနား၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တွင် လူဆိုးဂိုဏ်းများ သောင်းကျန်းလာ
မကြာမီကာလအတွင်းက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော မှုခင်းများနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများတွင် ယင်း လူဆိုးဂိုဏ်းများ၏ ပါဝင် ပတ်သက်မှုတွင် ထင်ရှားစွာ မြင်တွေ့လာရကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ယင်းလူဆိုးဂိုဏ်းများသည် ခြိမ်းခြောက်ခြင်းကို ပြုလုပ်သလို ရန်ငြိုး၊ရန်စရှိသူများကိုလည်း သတ်ဖြတ်ရန် အဆိုပါ လူဆိုးဂိုဏ်းများအား ငှားရမ်း သည်များ ရှိနေကြောင်းကို မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ဝေဘာဂီမြို့သစ် လူသတ်မှုက သက်သေပြခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်ပိုင်မြေပေါ်တွင် တရားမ၀င်ကျူးကျော်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ဥပဒေအားလိုက်နာမှုရှိစေရန် ဆောင်ရ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် တိုင်ကြားမှုအများဆုံးဖြစ်သည့် စည်ပင်သာယာပိုင်မြေပေါ်တွင် တရား မ၀င်ကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားသည့် အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဥပဒေအားလိုက် နာမှုရှိစေရန် အတွက် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ သိရှိရသည်။
`ရန်ကုန်မှာတိုင်ကြားမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ စည်ပင်မြေပေါ်မှာတရားမ၀င်ကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ အများကြီးရှိနေတယ်။ လက်ညိုးထိုးပြလို့ရတယ်။ သူတို့တွေအနေနဲ့ ဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာမှုရှိအောင် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ပြင်ဆင်ပေးသင့်တယ်´ ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဗဟန်း မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာညိုညိုသင်းက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် စည်ပင်မြေပေါ်တွင်တရားမ၀င်ကျူးကျော် မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပုဒ်မ-၂၉နှင့် ပုဒ်မ-၃၁တို့တွင် ငွေဒဏ်ဖြင့်မလုံလောက်ပါက ထောင်ဒဏ်ထည့်သွင်းစေလို သည့် အဆိုမှာ အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ကြောင်း ၄င်းမှ ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
``စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ တချို့က စည်ပင်ပိုင်မြေပေါ်မှာ တနေ့ကို ဒဏ်ငွေ-၃၀၀၀(ကျပ်သုံးထောင်) ဆောင်ပြီးတော့ လုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်ကိုင်နေကြတာမျိုးတွေရှိတယ်၊ တနေ့ကို ဒဏ်ငွေ သုံးထောင်ပဲ ရိုက်မယ် ဆိုရင် ပေးနေမှာပေါ့၊ တကယ်လို့ပြစ်မှုတစ်ခုကို ထပ်ခါထပ်ခါ ကျူးလွန်မယ်ဆိုရင် ဒီလို ၀ိသမလောဘသား တွေကို ဒဏ်ငွေ လောက်နဲ့ဆက်ထားလို့ မဖြစ်တော့ဘူး၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်မအနေနဲ့ မိုက်မိုက်ကန်းကန်းပဲ ထောင်ဒဏ်ပါ ထည့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ တင်ပြခဲ့တာပါ ´´ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာညိုညိုသင်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနပိုင်မြေတွင် ကျူးကျော်၍လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသည့် အမှုများ တွင် (၅၃)ကြိမ်အထိ ဆက်တိုက်ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်နေသည့် အမှု(၃၀)ကျော် ရှိကြောင်းကိုလည်း ရန်ကုန်မြို့ တော် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး၏ ပြောဆိုမှုအရသိရှိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သယာယာရေးကော်မတီအနေဖြင့် စည်ပင်သာယာပိုင်မြေပေါ်တွင် ကျူးကျော်၍ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြသည့် လမ်းဘေးဈေးသည်များအတွက်မှု ဒဏ်ငွေကျပ်-၅၀၀(ကျပ်ငါးရာ)မှ -ငွေကျပ် ၁၀၀၀၀ (ကျပ်တစ်ထောင်)အထိ ချမှတ်၍ ဒဏ်ရိုက်လေ့ရှိကြောင်းကိုလည်း သိရှိရသည်။
`` ကျူးကျော်လမ်းဘေးဈေးသည်လေးတွေကိုတော့ ဒဏ်ငွေ ၅သိန်းတို့ ၃သောင်းတို့တော့ ဘယ်တရားသူကြီး ကမှ ဒဏ်ရိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ သူတို့ရဲ့အနိမ့်ဆုံးဒဏ်ငွေက ၁သောင်းလောက်ပါပဲ´´ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ပြောဆိုသည်။
သတင်းများ ပြန်လည် ဝေမျှ ပေးသေား မြစ်မခ မီဒီယာ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
သမိုင်းဝင် ပွဲကြီးကို ပါဝင်ကြမဲ့ သူရဲကောင်း အနုပညာသည်တွေနဲ့ အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စု
ဓာတ်ပုံ...Ko Ah Bayah
၈လသက်တမ်းရှိ အစိုးရသစ် လက်ထက် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများအား ဌာနပြောင်းရွှေ့ မှုတစ်ခု ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဗဟိုအစိုးရအ ဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သူများထံမှ သိရသည်။ ”လက်ရှိ သမဝါယမပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးကို မွေး/ရေဝန်ကြီး ဌာနပူးတွဲ တာဝန်ယူရမယ်လို့ သိထားပါတယ်”ဟု ဝန်ကြီးဌာနများ နှင့် နီးစပ်သည့် အမည်မဖော်လိုသူ တစ်ဦးက အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီခန့်တွင် ဆိုသည်။ ထို မွေး/ရေဝန်ကြီးဌာနကို ယခင်က စီမံ/စီးပွားပြည်ထောင်စု ဝန် ကြီးဦးတင်နိုင်သိန်းမှ ပူးတွဲတာဝန်ယူ ခဲ့ဖူးပြီး ယခုပြောင်းလဲချက်ကြောင့် သမဝါယမ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်ထံသို့ ဦးတင်နိုင်သိန်းမှ တာဝန်ယူလွှဲပြောင်း ပေးရ တော့မည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ ဗဟိုအစိုးရအဖွဲ့သည် ဝန်ကြီးဌာန ၃၃ ခုကို ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ၂၉ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ယခင်က အမှတ်(၁) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ၏ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအပြောင်း အလဲကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးကြောင်း သိရသည်။ ”အဲဒီတုန်းက အမှတ်(၁)စက် မှုဝန်ကြီးက ဦးကျော်စွာခိုင်ပဲ။ သူ့ နေရာကို အရင်ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦး စိုးသိန်းကို တာဝန်ယူခိုင်းတယ်။
ကြည့်ရတာတော့ ဒီအစိုးရအဖွဲ့က သူ့လိုင်းနဲ့သူ ကျွမ်းကျင်တာ ကို တာဝန်ယူ စေတဲ့သဘောလုပ် ဆောင်နေတာ ဖြစ်မယ်”ဟု ဝန်ကြီး ဌာနများနှင့် နီးစပ်သူက ထပ်မံဆိုသည်။ မွေး/ရေဝန်ကြီးဌာနအား တာဝန်ယူခဲ့သည့် ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီး ဦးတင်နိုင်သိန်းမှာ စီမံ/စီးပွားဝန်ကြီး ဌာနတစ်ခုထဲကိုသာ တာဝန်ယူရ မည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းမှာ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးအသိုင်းအဝိုင်း၌ ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှုကိုလိုလား သူ၊ စီးပွားရေးအမြင် ရှိသူတစ်ဦးဟု နာမည်ထွက်သူတစ် ဦးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးမှ အနားပေးခံရ
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ တက်ပြီးနောက်ပိုင်း ၈ လအကြာ၌ တိုင်းဒေသကြီး ဝန် ကြီးချုပ် အဖြစ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်နေသည့် ဦးခင်ဇော်မှာ ယမန်နေ့က ရာထူးမှ အနားပေး ခြင်း ခံလိုက်ရကြောင်း ဗဟို အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦး၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။ ”ဒီနေ့ ရန်ကုန်ကို ဦးခင်ဇော် ရောက်လာပြီး အထုတ် အပိုးတွေ အများကြီးနဲ့၊ ဒီတော့ ကြည့်ရတာ ရာထူးက အနားပေးခံရတာ သေချာ သလောက်ရှိသွားပြီ” ဟု အမည် မဖော်လိုသူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခင် အစိုးရ လက်ထက်၌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာထူးဖြင့် စစ် ဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်များကို ထမ်း ဆောင်ခဲ့ဖူးပြီး ယခု အစိုးရသစ် လက်ထက်၌ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသ ကြီး ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သူ ဦးခင်ဇော်မှာ မည်သည့် အချက်ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ရာထူးမှ အနားပေးခံရသည်ကို မည်သူမှ တိကျစွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆို နိုင်ခြင်း မရှိသည်ကိုလည်း ပေါ်ပြူလာ နယူးစ်မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လပိုင်း အတွင်းက လည်း ရှမ်းပြည်နယ်အဆင့်ရှိ ဝန် ကြီးတစ်ဦး၏ တရားဝင်နှုတ်ထွက် သွားခဲ့မှုလည်း ရှိခဲ့ကြောင်း အစိုးရ မှ ထုတ်ပြန်သည့် စာရင်းများအရ သိရှိခဲ့ရသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, November 25, 2011 Links to this post
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အကြောင်းကို ရေးသား ထားသော စာပေများ များစွာပေါ် ထွန်းလျက် ရှိရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်သည် မင်းသားကြီး လုပ်ချင်သူတွေ အကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားခဲ့ ကြောင်း သိရပါသည်။ ယခုအခါ ဖဆပလသည် လူထုရှေ့ ၌ မားမားမတ်မတ်ရပ်၍ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေခြင်းကို ထိုမင်းသားကြီး လုပ်လိုသူများသည် မနာလိုမရှုစိမ့်ကြချေ။ ရပ်ချင်းရပ်လျှင် သူတို့ကသာရပ် လိုကြသည်။ သို့ရာတွင် သူတို့၏ ရှေ့နောက်မညီသော ခေါင်း ဆောင်မှု၊ အမြင်တိုသောခေါင်းဆောင်မှု၊ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော ဆို သော ခေါင်းဆောင်မှု၊ မကြာခဏ ဖောက် လွှဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ခဲ့ရ သော ခေါင်းဆောင်မှုများကြောင့် လူထုကလည်း ၄င်းတို့ရှေ့တွင် ထို မင်းသားကြီး လုပ်လိုသူများကို အရပ်မခံချေ။ ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့သောစကားကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာပါက အောက်ပါအတိုင်း တွေ့နိုင် ပါ၏။
၁။ မင်းသားကြီးလုပ်ချင်ကြသူတွေ အမှန် ရှိနေကြ၏။
၂။ ထိုကဲ့သို့ မင်းသားကြီးလုပ်ချင်ကြသူ တွေသည် မိမိထက်သာသူက ရှေ့ တန်း၌ ရောက်၍ လူထုအားပေးမှုကို ခံရလျှင်သူတို့က မနာလိုကြပါ။
၃။ ၄င်းတို့၏ညံ့ဖျင်းသော အရည်အသွေးကြောင့် လူထုက သူတို့ကို လက်မခံပါ။ ဤတွင် သေချာစဉ်းစားရပါသော် ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့သလို မင်းသားကြီးလုပ်ချင်သူတွေမှာ ဒုနှင့်ဒေးရှိပါ၏။ ပုထုဇဉ်တိုင်း လိုလို မင်းသားလုပ်ချင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါပေ မယ့် ပုထုဇဉ်တွေထဲမှာ ကွဲပြားသွားတာက မိမိထက်သာလို့ မိမိရှေ့က မင်းသား ဖြစ်သူကို တချို့ကမုဒိတာပွားနိုင်ပြီး တချို့ က မနာလိုဖြစ်၏။ ဥပမာ ကျွန်တော် မောင် ထွန်းဝင်း ကိုလည်း မင်းသားလုပ်ပါဆိုရင် လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော့်ကို ဟောလီးဝုဒ်က ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်မှ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသား တင် ရိုက်ဖို့ကမ်းလှမ်းရင်လက်ခံမှာပါ။ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်ကလည်း သိနေတာ ကျွန်တော့် လို ကောင်မျိုးကို ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသား တင် ရိုက်ရင် ဒေါ်လာ ဘီလျံချီပြီး ရှုံးမှာပါ။
ဒီတော့ မိမိထက် အပြန်တစ်ထောင်လောက် သာတဲ့ ရှောင်ကွန်နရီတို့၊ ရော်ဂျာမိုးတို့ကို တင်ရိုက်တော့ ကျွန်တော် မုဒိတာပွားရပါ ၏။ ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့သော မင်းသားကြီး လုပ်လိုသူဆိုသည်မှာ ကျွန်တော့်လိုကောင်မျိုး မဟုတ်။ ကျွန်တော့်လိုကောင်မျိုးက မိမိ တက်လမ်းအတွက် ရိုးရိုးသားသား ကြိုးစားမည်။ ကိုယ့်ထက်သာသူတွေ့ရင် ကွန်ဂရက် ကျူလေးရှင်းပါလို့ သွားပြော မည့်သူဖြစ်၏။ ဗိုလ်ချုပ်ပြောသော လူမျိုးက- မင်းသားကြီး မလုပ်ရရင် ပတ်မကြီး ထိုးဖောက်မယ်ဆိုသော လူစားမျိုးဖြစ်၏။ ဒီလိုလူစားမျိုးတွေက ဗိုလ်ချုပ်ရှိစဉ်တုန်းက သာမဟုတ် ယနေ့တိုင်ရှိနေဆဲပါ။ နောင် လည်း ရှိနေဦးမှာပါ။ မင်းသားကြီး လုပ်ချင်ကြတယ်ဟု ဆိုရာ၌ ရှင်ဘုရင်၊ သမ္မတ၊ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်မှ ရယ်လို့ မဟုတ်။ အသင်းအဖွဲ့ထဲမှာဆိုရင် ဥက္ကဋ္ဌ လုပ်လိုကြပါ၏။ ရာထူးဆိုလျှင် လိုချင်ပါ၏။ လိုချင်တာမလုပ်ရရင် ပွဲဖျက် တတ်ပါသည်။ မိမိထက်သာတဲ့သူရှိရင် နောက်ကျော က ဓားနဲ့ထိုး၊ ကုန်းချော၊ သပ်လျှို၊ အချွန် နဲ့မ၊ အဆင်းဘီးတပ်စသော ကောက်ကျစ် သော လုပ်ရပ်များကို လုပ်တတ်ကြပါ သည်။ တကယ်တော့လည်း ဒီလိုဖြစ်ကြ သည် ဆိုရာမှာ တရားသဘောကို နား မလည်၍ဘဲ ဖြစ်ပါသည်။ မင်းသားကြီး မကလို့ ဧကရာဇ်ဘုရင်မင်းကြီးပင် ဖြစ်ပါ စေ၊ ဧကရာဇ်မင်းကြီး၏ ဘဝရဲ့ ပန်းတိုင် ဆိုတာ နတ်ရွာစံခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကျဆုံးပြီးမှသာ မွေးဖွားလာသူဖြစ်ပါ၏။ ဒီတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကိုမမီလိုက်၍ ဗိုလ်ချုပ်ရှိစဉ် က မင်းသားကြီးလုပ်ချင်သူတွေဟာ ဘယ် သူတွေလဲ၊ ဘာတွေလုပ်ကြလဲဆိုတာ ကျွန် တော် သေသေချာချာမသိပါ။ သို့သော် ကျွန်တော် အရွယ်ရောက် လာသောအခါ မင်းသားကြီးလုပ်ချင်သူ တွေကို ဒုနှင့်ဒေးတွေ့ခဲ့ရပါ၏။
ကျွန်တော် ကြီးပြင်းလာသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တော့ ရာထူးလိုချင်တဲ့လူတွေ တော်တော်များပါ တယ်။ ရာထူးဆိုတဲ့စင်မြင့်ပေါ်ကို တက် ချင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ရာထူး ဒဿနကို သေသေချာချာနားမလည်ဘူး။ ဥပမာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းရာထူး ဆိုရင်လည်း ပြည်သူက အလုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး၊ ရာထူးရှိသူက ဘယ်လောက်ပဲကြီးပါစေ ပြည်သူရဲ့ ဝန် ထမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ INGO ဝန်ထမ်းဆိုရင်လည်း ဘတ် ဂျက်အလှူရှင်တွေရဲ့ဝန်ထမ်းဆိုရင် မမှားပါ ဘူး။ ကုမ္ပဏီတို့၊NGO တို့ဆိုရင် ရာထူး နာမည်ကို ခပ်ကြီးကြီးပေးချင်သလို ပေး လို့ရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် လူတစ် ယောက်ဟာ ရန်ကုန်မြို့မှာ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ဖွင့်တာ အောင်မြင်တယ် ဆိုပါတော့။
ဒါဆိုရင် ဒီလူဟာ မန္တလေးမှာ တပည့်တစ်ယောက်လွှတ်ပြီး လက်ဖက် ရည်ဆိုင်ခွဲ ဖွင့်ချင်တယ် ဆိုပါစို့။ ၄င်း မန္တလေး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ကြီးကြပ် မယ့်တပည့်ကို အထက်မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ မန်နေဂျာလို့ အမည်ပေးရင်လည်း ရပါ တယ်။ နောက် ဥပမာတစ်ခုကတော့ INGO တစ်ခုဟာ ထိုင်းနိုင်ငံသွားပြီး လူ ၅၀ လောက်နဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခုကို မြို့နယ်တစ်ခု မှာ လုပ်တယ်ဆိုပါစို့။ ပြီးရင် ဗီယက်နမ် မှာလည်း တစ်မြို့နယ်လောက်မှာ စီမံကိန်း တစ်ခု၊ ၄င်းနောက် ကမ္ဘောဒီးယားမှာလည်း လူ ၃၀ လောက်နဲ့ မြို့နယ်တစ်ခုမှာ စီမံ ကိန်းတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုပါစို့။ ၄င်းစီမံကိန်း ၃ ခုကို အရာရှိတစ်ယောက်က ကြီးကြပ် ရင် ၄င်းအရာရှိကို Southeast Asia Regional Director (အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသကြီးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး) လို့ နာမည်ပေးရင် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီး ဖြစ်သွားတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဒါတွေဟာ ပညတ်ချက်တွေပါ။ သို့သော်လည်း အဟုတ်ကြီးထင်ပြီး နေရာလိုချင်ကြတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲရာထူးကြီးကြီး အလှူရှင်ရဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ရပ်တည်ရတာပါ။ နေရာလိုချင် တော့ ကိုယ့်ထက်သာတဲ့သူဆိုရင် နောက် ကျောကဓားနဲ့ထိုး၊ အချွန်နဲ့မ၊ ကုန်းချော တာတွေ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ တစ်ခါတုန်းက အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ကို တင်ပြပါရစေ။G 20 စက်မှုနိုင်ငံကြီး တစ်ခုက အာဆီယံအဖွဲ့တစ်နိုင်ငံမှာ INGO စီမံကိန်း လာလုပ်ပါတယ်။G 20 နိုင်ငံသူ တစ်ဦးက ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Country Representative ရာထူးနဲ့ လာလုပ်ပြီး ဒေသခံ အရာရှိအဆင့် ၄ ဦးကို ငှားပါ တယ်။ အမျိုးသား ၃ ဦးနဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါ။ အဲ့ဒီအထဲမှာ အမျိုးသား ၂ ဦး က အမျိုးသမီးထက် စီနီယာကျပြီး ရာထူး ကြီးပါတယ်။ အမျိုးသမီးက မင်းသမီးကြီး လုပ်ချင်နေပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသူကို တိုက် ရိုက် အစီရင်ခံရသော အရာရှိအဆင့် (Immediate Position To International Expert) အဆင့်ကို လိုချင်နေပါတယ်။
ဒါ ကြောင့် သူ့အထက်မှာရှိတဲ့ အရာရှိ ၂ ယောက်ကို နောက်ကျောက ဓားနဲ့ထိုးပါ တော့တယ်။တိုက်ဆိုင်ချင်တော့ G 20 နိုင်ငံသူမမကြီးဟာ အသက် ၄၀ ခန့်ဖြစ်ပြီး သူ့နိုင်ငံမှာ သူ့ရဲ့ရည်းစား သစ္စာဖောက် တာ ခံထားရတဲ့ အသည်းကွဲမမကြီး ဖြစ်နေ ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ အမျိုးသမီး ဒေသခံ အရာရှိဟာ သူ့အထက်က အမျိုးသား ၂ ယောက်ဟာ မိန်းမရှုပ်သူတွေဖြစ်ကြောင်း ကုန်းချောလို့ နိုင်ငံခြားသူ မမက အမျိုး သားအရာရှိ ၂ ယောက်ကို ငြှိုးလို့ ၄င်း အရာရှိ ၂ ယောက်သည် တခြားINGO များသို့ ပြောင်းပြေးကြရာ တစ်ယောက်က ဝေးဝေးပြေးပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအထိတောင် ရောက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံက INGO တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီတော့ မင်းသမီးကြီး လုပ်ချင်တဲ့ အရာရှိမဟာ အမျိုးသားစီမံကိန်းအရာရှိ ရာထူးကိုရသွားပြီး INGO ရဲ့ သော့ချက် ကျတဲ့ရာထူးကိုရသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီရာထူးမျိုးက စာတတ်တိုင်းလုပ်လို့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ အရေထူခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ လိုက်လျောညီထွေစတဲ့ လူမှုရေးစွမ်းရည် တွေ လိုပါတယ်။ သူ့မှာရှိတဲ့အရည်အချင်း က ယောကျာ်းတွေ မိန်းမကိစ္စရှုပ်တယ်လို့ အတင်းပြောပြီး ရာထူးတက်၊ စင်ပေါ် ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နိုင်ငံ ခြားသူမမကြီး တခြားနိုင်ငံကိုပြောင်းတော့ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်နေရာမှာ အမျိုးသား တစ်ဦး G 20 နိုင်ငံသား ရောက်လာရာ မင်းသမီးကြီးရာထူးရနေတဲ့ အရာရှိမလည်း အလုပ်ပြုတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းသားကြီးလုပ်တယ်၊ မင်းသမီးကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာ ရာထူးနဲ့ မိမိသဘာဝနဲ့ အံဝင်ဖို့လိုပါတယ်။ အရည် အချင်းရှိဖို့လည်း လိုပါတယ်။ အနုပညာစင်မြင့်ပေါ် တက်တော့မယ် ဆိုရင်လည်း ပရိသတ်လက်ခံဖို့လိုပါတယ်။ ပရိသတ် လက်မခံဘဲ စင်ပေါ်တက်ရင် ခဲပေါက်ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် မင်းသား ကြီးလုပ်ချင်ပြီး သူများကို မနာလိုသူတွေ ကို မချီးကျူးပါဘူး။ သဘောမကျပါဘူး။ သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်ကွယ်လွန်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာသော်လည်း မင်းသားကြီး လုပ်ချင်၊ မင်းသမီးကြီးလုပ်ချင်လို့ မနာလို စိတ်နဲ့ နောက်ကျောက ဓားနဲ့ထိုးတဲ့လူမျိုး တွေ အများကြီးရှိနေဆဲပါ။ တကယ်တော့ဗိုလ်ချုပ်၏ မိန့်မှာချက် များသည် ဖတ်ရုံနဲ့မပြီး၊ ဖတ်ပြီးစဉ်းစား၊ စဉ်းစားပြီး လက်တွေ့ကျင့်မှ အကျိုးရှိမယ် ဟု ဆိုချင်ပါကြောင်း။ ။
သတင်းရင်းမြစ်... Venus News Journal
ဒေါ်ခင်ကြည် အတ္ထုပ္ပတ္တိ ရိုက်ကူးရန် အသင့် ဖြစ်နေ
﻿ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ကြည်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Documentry ရိုက်ကူးရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း စီစဉ်သူဇာဂနာကပြောသည်။ ﻿ကိုမင်းထင်တို့က ဇာတ်ညွှန်းကို ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီ။ ရိုက်ရတဲ့နေရာ က အန်တီ့အိမ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် လုံခြုံရေးအခြေအနေကို ပြင်ဆင်နေ တာပါ။ ကျန်တာကတော့ အဆင် သင့်ပါပဲ။
စရိုက်ရုံပဲကျန်တော့တယ် ဟု ဇာဂနာက ရိုက်ကူးနိုင်မှုအခြေ အနေကိုပြောသည်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဇာတ်ကားထဲတွင် ပါဝင်သူသရုပ်ဆောင်များအား ရွေးချယ်စီစဉ်ပြီးသွားပြီဖြစ်သော ကြောင့် မည်သူမည်ဝါဆိုသည်ကို ဇာတ်ကားထွက်ရှိလာမှသာ ကြည့် ရှုရန်ထပ်မံပြောသည်။ ﻿ထို ဇာတ်လမ်းအား ရိုက်ကူး ပြီးစီးပါကသရုပ်ဆောင် ဇာဂနာ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားသော အရာဖြစ်သောကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး ရှိလူများအား အခကြေးငွေ မယူဘဲ ပြသမည့်အတွက်ဆင်ဆာတင် ရန် အစီအစဉ် မရှိကြောင်းသိရသည်။
အနုပညာနှင့်ပတ်သက်၍ သ ရုပ်ဆောင်ဇာဂနာက ယခင်အတိုင်း ဆက်လုပ်သွားရန်ရှိပြီး အသက်အ ရွယ်နှင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကြောင့်အငြိမ့်မကတော့ဟုဆိုသည်။ တစ်ကိုယ်တော်အငြိမ့်ကတော့ ကဖြစ်ချင်မှကဖြစ်မှာပါ။အသက်အ ﻿ရွယ်နဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့် ကျွန် တော်မကတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ညီ တွေကပါလိမ့်မယ်။သီးလေးသီးက တာကျွန်တော်ကသလိုပါပဲ။ သီး လေးသီးပြက်တဲ့ပြက်လုံးတွေက ကျွန်တော့်ပျက်လုံးတွေပါပဲ။ သူတို့ ပါးစပ် ထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေ ကျွန် တော်ပြောတယ်လို့ ပရိသတ် မှတ်ယူစေချင်တယ်ဟုအငြိမ့်ကခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ဇာဂနာကပြောသည်။
ဇာဂနာကနိုင်ငံခြားမှမိသားစု ဝင်များကိုသွားတွေ့ရန် အတွက် ပတ်စ်ပို့ကိုစောင့်စားနေရကြောင်း လည်း ပြောသည်။ ﻿ပတ်စ်ပို့မကျသေးလို့ပါ။ ခဏ ပဲသွားမှာပါ။ ဒီမှာအလုပ်တွေရှိတော့ ပြန်လာရမယ်။ ကျွန်တော့် မိန်းမနဲ့ သားသမီးတွေကို တွေ့ဖို့ သွားမှာပါ။ သားနဲ့သမီးက ကျောင်း မပြီးသေးလို့ ပြန်မလာသေးတာပါ ဟု ဆိုသည်။ ထပ်မံ၍် ဇာဂနာ၏သားဖြစ် သူမှာ နောက် ၆ လတွင် ကျောင်း ပြီးတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့် အနု ပညာလုပ်ငန်းတွင် အောင်မြင်မှုရရှိ နေသော သူငယ်ချင်းများအား တစ် ဖက်တစ်လမ်းမှ လာရောက်ကူညီ ရန်အစီအစဉ်ရှိကြောင်း ပြောသည်။
NLD ပါတီ ခမောက်အစား ပါတီ၏အလံကို တံဆိပ်အဖြစ် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပါတီသည် နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်ကာလအထိ အသုံးပြုခဲ့သော ခမောက်တံဆိပ်ကို ပါတီအား မှတ်ပုံ ပြန်တင်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုတော့မည်မဟုတ် ကြောင်း NLDဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် ဦးဝင်းထိန်က ပြောကြားသည်။
ခမောက်အစား ပါတီ၏အလံကို တံဆိပ်အဖြစ် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ NLD ပါတီအလံ တံဆိပ်သည် အနီရောင်နောက်ခံအပေါ်တွင် ဘယ်ဘက်အပေါ်ဒေါင့်ရှိ ကြယ်ကို ခွပ်ဒေါင်းက ဦးတည်နေပုံ ဖြစ်သည်။
“တံဆိပ်ပဲ ပြောင်းတာပါ။ ပါတီယူနီဖောင်းကိုတော့ မပြောင်းပါဘူး” ဟု ဦးဝင်းထိန်က ပြောကြားသည်။ ယင်းယူနီဖောင်းကို ပါတီဝင်များသည် မဝတ်ဆင်သော်လည်း ရနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
NLD ပါတီသည် မှတ်ပုံပြန်တင်မည်ဟု ကြေငြာလိုက်ပြီး ပါတီအတွင်း အပြောင်းအလဲအမြောက်အများကို ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး ယင်းသို့ ပြောင်းလဲမှုများ အပေါ်တွင်လည်း အမျိုးမျိုး ဝေဖန်ပြောဆိုလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“NDF(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု)နဲ့ ဦးသိန်းညွန့်ပါတီ တံဆိပ်တွေနဲ့ တူနေမှာစိုးလို့ ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ တူတယ်” ဟု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဟောင်းတစ်ဦးက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေဖြစ် NLDနှင့် ခမောက်ကို တပူးတည်းသိမြင်ကြသည့်အတွက် ခမောက်မရှိတော့သော်လည်း NLD ပါဟု စည်းရုံးနိုင်သဖြင့် တံဆိပ်ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းကြောင့် ဆိုးကျိုးမရှိကြောင်း NLD မှစည်းရုံးရေးမှူးတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပမည့်ရက် မသတ်မှတ်ရသေးကြောင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြောကြားလိုက်သော်လည်း လစ်လပ် နေရာများတွင် ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်များကို အထက်မှညွှန်ကြားချက်အရ ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အမျိုးသမီးတွေ လွှတ်တော်ထဲရောက်လာရင် မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာ ဘယ်လောက်အားကောင်းလာနိုင်ပါသလဲ
လွှတ်တော်(၃)ရပ်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် လစ်လပ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၄၈)နေရာထက်မနည်းရှိကြောင်း ကြားသိရသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရန် ပြင်ဆင်နေကြပြီ၊ တစ်ချို့ ပါတီက အောင်နိုင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်နေကြသလို တစ်ချို့ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ရန် နှင့် ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်လာကြောင်း သိရှိရသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေဖြင့်လည်း အမျိုးသမီးအများစုအား ရွေးချယ်ပြီး ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ထို့ကြောင့် (၁) မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍမည်မျှ အရေးပါနေပြီလဲ၊ (၂) အမျိုးသမီးများ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာမှုအပေါ်အမြင်၊
(၃) လွှတ်တော်တွင် အမျိုးသမီးအများစုနေရာရရှိလာပါက အားကောင်းလာနိုင်သည့် ကဏ္ဍများ နှင့်
(၄) အမျိုးသမီးများ၏ အဓိက အားနည်းချက်မှာ မည်သည့်အရာများဖြစ်ပါသနည်းဆိုသည့် အစရှိသည့် မေးခွန်း တို့အား လွှတ်တော်တွင်းတက်ရောက်နေသော အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာ ညိုညိုသင်းနှင့် အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမြစ်ဥာဏစိုး၊ အန်ဒီအက်ဖ်ပါတီမှ နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်သူ ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီမှ ဒေါ်ရီရီစံ တို့အား မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီးလူဦးရေက အမျိုးသားလူဦးရေထက်ပိုများပါတယ်။ ပညာရပ် နယ်ပယ် အသီးသီးမှာ ဆိုရင်လည်း အမျိုးသမီးတွေက ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးတွေ အများကြီးနဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်တာ လည်း မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။ အထင်ကရ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘယ်လိုမှငြင်းဆိုလို့မရတဲ့ မျက်ကွယ်ပြုလို့မရတဲ့ ဒီမိုကရေစီအမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလည်း အမျိုးသမီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့တော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကဏ္ဍကို ကျွန်တော်တို့လျစ်လျူရှုထားလို့မရပါဘူး။ နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်မှာလည်း အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အသိအမှတ်ပြုရမှာဖြစ်သလို အမျိုးသမီးတွေအတွက် နေရာအခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်း ဖန်တီးပေးရခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ သူတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က အဆုံးအဖြတ် ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်လာတာကောင်းပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ အမျိုးသမီးရယ်၊ အမျိုးသားရယ် လူငယ်ရယ်၊ လူကြီးရယ် လူမျိုးခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး။ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မား သူက သူစွမ်းဆောင်နိုင်တာကို စွမ်းဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင် လက်ရှိနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ မစ္စကလင်တန်၊ ဖိလစ်ပိုင် ဒီမိုကရေစီခေါင်ဆောင် မစ္စ အာကွီနို၊ Iron Lady မာဂရက်သက်ချာ လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ကျွန်တော်တို့က တစ်သီးတစ်သန့်ထားလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေလွှတ်တော်ထဲ ၀င်လာမယ်ဆိုရင်တော့ အမျိုးသမီးရယ်၊ အမျိုးသားရယ် ခွဲခြားဆက်ဆံနေဖို့ မရှိပါဘူး။ တစ်ချို့တွေက အမျိုးသမီးတွေ လွှတ်တော်ထဲရောက်လာရင် အမျိုးသမီးရေးရာ စောင့်ရှောက်ရေး၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေမှာ ပိုပြီးတိုးတက်လာမယ်လို့ မြင်တာမျိုးတွေရှိတယ်။
အမျိုးသမီးတွေမှာလည်း စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးအမြင် ပြည့်ဝပြီးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့တော့ လူမှုရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာသာမက ဘယ်နယ်ပယ်ကဏ္ဍမှာမဆို အမျိုးသမီးတွေက စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မြင့် နဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အဓိကအားနည်းချက်အပေါ် အမြင်ကမရှိပါဘူး။ အမျိုးသမီးနဲ့ အမျိုးသား တန်းတူရည်တူ ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့က အမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊ အမျိုးသားဖြစ်စေ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို တစ်ထပ်တည်းဖော်ဆောင်ပေးနိုင် မယ့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံကို ခေါင်းဆောင်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကို လက်ကမ်းကြို နေပါ့မယ်။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးပါတာက ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးရစဉ် ကာလကတည်းက မြန်မာအမျိုး သမီး တွေရဲ့ ကဏ္ဍက အရေးပါတဲ့နေရာရောက်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဒါကို သတိမူတာ အားနည်းလာတယ်။ အခု NLD က အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားတွေကို Balan မျှမျှ ရွေးချယ်ပေးခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုတာ ကောင်းတာပေါ့။
အမျိုးသမီးတွေက နိုင်ငံရေးလောကထဲကို ၀င်ကိုဝင်ရမှာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ ထက်ဝက် ကျော်က အမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီနိုင်ငံတိုးတက်ကြီးပွားပြီး ကောင်းစားဖို့ဆိုရင် အမျိုးသမီး တွေ နိုင်ငံရေးလောကထဲကို မဖြစ်မနေ၀င်ကို ၀င်လာရမယ်။ ၀င်တယ်ဆိုတာကလည်း နည်းနည်းလေးဝင်လို့ မရဘူး။ အင်နဲ့အားနဲ့ ၀င်မှဖြစ်မယ်။ ဒါမှသာ ဒီနိုင်ငံ ကြီးပွားတိုးတက်မှု လမ်းစပေါ်ရောက်မှာပါ။ မဟုတ်ရင် ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဘယ်လိုမှ ရမှာမဟုတ်ဘူး။
နိုင်ငံတော်ရဲ့ မူဝါဒချမှတ်တဲ့နေရာမှာ အမျိုးသမီးတွေကို ထည့်သွင်းပါဝင်စေခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်မှာ ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြဿနာတစ်ရပ်ကို ရှင်းပြကိုင်တွယ်တဲ့နေရာမှာ မွေးရာပါ ဗီဇအရကိုက အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားက မတူတာ။ ပြဿနာတစ်ရပ်ကို ရှုမြင်ပုံကိုက ကွဲပြားတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ မှာက နိုင်ငံတော်ရဲ့ မူဝါဒကို အများအားဖြင့် အမျိုးသားထုကသာ ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ကြတာ တွေ့ရတယ်။ ကျွန်မတို့မွေးပြီး အနှစ်လေးဆယ်အတွင်းမှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့မူဝါဒချမှတ်တဲ့နေရာမှာ အမျိုးသားထုကသာလျှင် ကြီးစိုးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် မူဝါဒတွေက ပြည့်စုံမှုမရှိခဲ့ဘူး။ ပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့အတွက် တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိဘဲ တိုင်းပြည်ဟာ ခေတ်နောက်ကျခဲ့တယ်။ အခုကစပြီးတော့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ မူဝါဒတွေကို ရေးဆွဲတဲ့ နေရာမှာရော၊ အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ နေရာမှာရော အမျိုးသမီးထုက ပါဝင်လာခြင်းအားဖြင့် စနစ် ဟောင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ပြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမျိုးသမီးနဲ့ အမျိုးသား က ပြဿနာတိုင်းကို ရှင်းတတ်ပုံ၊ ရှုမြင်ပုံ၊ ဆုံးဖြတ်ပုံက ကွဲကိုကွဲပြားတယ်။ အမျိုးသမီးဖြေရှင်းရင် ကိစ္စ တော်တော်များများက လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ အစဉ်ပြေပြေချောမွေ့စွာနဲ့ အောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးဆုံးတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ Decision Making Power ကို အမျိုးသမီးတွေလက်ထဲကို မဖြစ်မနေ ထည့်ဖို့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ တော်တော်လေးဦးစားပေးလာကြတယ်။
အဓိကအားနည်းချက်က မြန်မာအမျိုးသမီးတွေက သူများပြောတာယုံလွယ်တာပေါ့။ နောက်ပြီး ပြဿနာတစ်ခု ကို စိတ်ခံစားချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တတ်တာ။ စိတ်ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးတာ။ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ရင် တိုင်းပြည်မှာလည်း မဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက်တာတွေဖြစ်ခဲ့တာ အများကြီးရှိတယ်။ ဒါ Emotion ကြောင့်ပါ။ အထူး သဖြင့် နိုင်ငံရေးလုပ်မယ့်ခေါင်းဆောင်တွေမှာ စိတ်ခံစားမှုကို ဦးစားမပေးဖို့အရေးကြီးတယ်။ ဘယ်ကိစ္စမဆို အယုံမလွယ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာ အမျိုးသမီးပညာတတ်တွေ ပေါများလာတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလည်း အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်လာတယ်။ အမျိုးသားတွေနဲ့ တန်းတူပါဝင်ပြီး ရင်ဘောင်တန်းလာတယ်။ ဒီနေရာ အမျိုးသမီး မ၀င်ရဘူး။ အမျိုးသမီးတွေက ဒီလိုမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ အရင်တုန်းက ကန့်သတ်ချက်မျိုးတွေ လျော့ ပါး လာတာတွေ့ရတယ်။ နိုင်ငံပြောင်းလဲလာတာနဲ့အတူ တခြားနိုင်ငံများနည်းတူ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေနဲ့တန်းတူ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးမှာ ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Globalization ခေတ်ကြီးမှာ အမျိုးသားရယ် အမျိုးသမီးရယ်ဆိုပြီး ခွဲခြားလို့မရတော့ဘူး။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထိုးဖောက်လာပြီး အမျိုးသမီးရယ်လို့ ကန့်သတ်ချက်မရှိတော့ဘူး။ နိုင်ငံရေးမှာ အမျိုးသမီးတွေပါဝင်လာတယ် ဆိုတာ အားရ၀မ်းသာဖြစ်တယ်။ လွှတ်တော်မှာလည်း အမျိုးသမီးတွေ ဒီထက်မက အများကြီး ပါဝင်သင့်တယ် လို့ ယူဆတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာလည်း အမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်တွေ ရှိလာတယ်။ နောင်တစ်ချိန်မှာ သမ္မတအဆင့် ထိ တက်လှမ်းလာနိုင်မယ်။ နောင်တစ်ချိန်မှာ အမျိုးသမီးကဏ္ဍတွေက အရေးပါလာမယ်လို့မျှော်လင့်ထား တယ်။
လွှတ်တော်မှာ အမျိုးသမီးတွေများလာရင် အထူးသဖြင့်ကတော့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကဏ္ဍတွေ၊ ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်လာနိုင်ရင် ဒီထက်မက စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အားနည်းချက်က စိုးရိမ်စိတ်ရှိတာပေါ့။ စိုးရိမ်စိတ်တွေကို ပပျောက်အောင်ဖျောက်ပြီး ကိုယ့် ကိုကိုယ် ယုံကြည်စိတ်အပြည့်အ၀ ထားနိုင်ရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အားနည်းချက်တွေ လျော့ပါးသွား မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီမှာတင် အဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာကြီးကအချိန်နဲ့အမျှ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ဒီထက်မက တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမယ်။ တစ်ဆင့်ထက်တစ်ဆင့် တိုးတက်လာမယ်။ အုပ်ချုပ်စရာ လူတန်းစား မရှိတဲ့အချိန်ထိ တိုးတက်လာရင် ကမ္ဘာမှာ တော်တော်လေးကို ပြောင်းလဲတိုးတက်နိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူဦးရေသန်း၆၀ မှာ သန်း ၃၀က အမျိုးသမီးဖြစ်နေပြီး ၂၅သန်းက အမျိုးသား ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် အမျိုးသမီးဦးရေကများတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက ပညာရေး၊ ကျမ်းမာရေး၊ စီးပွားရေး အစရှိတဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်လာကြတော့ အမျိုးသမီးရဲ့အခန်းကဏ္ဍက ပိုပြီးတော့မြင့်မားနေတာ တွေ့ရ တယ်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဦးနှောက်က အမျိုးသားတွေရဲ့ဦးနှောက်ထက် ဘာမှထူးပြီးတော့ ပိုနိမ့်ကျတာ မရှိတဲ့ အတွက် အမျိုးသမီးတွေကို နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး နယ်ပယ်အားလုံးမှာ ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်လာတာကို အားလုံးက သဘောတူတယ်။ အမျိုးသမီးလည်း နိုင်ငံသားပဲ။ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးက အားလုံးအပေါ်မှာ တန်းတူရည်တူ ရှိရမှာပေါ့။ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေ ထက်ပိုပြီး ထဲထဲဝင်ဝင်ရှိတယ်။ အခုခေတ်မှာတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လုပ်အား၊ ကိုယ်စွမ်းအား ဥာဏ်စွမ်းအား တွေကို အသုံးပြုတဲ့ခေတ် ရောက်လာပြီမို့ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာဆောင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်မယ်နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကြိုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေလွှတ်တော်ထဲရောက်လာရင်တော့ ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာသင်ကြားရေး၊ လူမှုရေး စောင့်ရှောက်ရေးတွေမှာ ထဲထဲဝင်ဝင်လုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။ အမျိုးသမီးရေးရာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကိစ္စတွေ ကို တိုက်ရိုက်တင်ပြနိုင်ခွင့်တွေ ရှိတယ်။ ဒါတွေက ဆင့်ကဲဖြစ်လာမယ့် ဖြစ်လာမယ့် အကြောင်းအရာတွေပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုရင် အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ အရေးပါတယ်။ မပါဘူးဆိုတာ ပေါ်လွင်နေတယ်။ အမျိုးသားဖြစ်စေ၊ အမျိုးသမီးဖြစ်စေ ခေါင်းဆောင်မှုကို တတ်ကျွမ်းပြီးလကောင်းမွန်ထိပ်တန်းရောက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုရှိမယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့လည်း ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြယုဒ်တစ်ခုပါပဲ။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အဓိကအားနည်းချက်က ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမြင်ရှင်းရှင်း သိဖို့လိုတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာအများဆုံးဖြစ်တတ်တာက ဟိန္ဒူအယူအဆ၀င်လာတာဖြစ်တဲ့ ဘုရားကျောင်း ထဲ အမျိုးသမီးမ၀င်ရဘူး။ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက်ပိုနိမ့်ကျတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆအလွဲတွေ ရှိမနေဖို့လိုတယ်။ ဗုဒ္ဓဘုရားက လူသားဝါဒအပေါ်မှာ အတန်းအစားခွဲခြားတာမရှိဘူး။ ဒါကို ရှိတယ်ထင်ပြီး အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ယူဆနေရင် အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေနောက်မှာ ရှိနေမယ်။ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေရှေ့ဖြတ်လျှောက်သွားရင် ခေါင်းငုံ့သွားရမယ်ဆိုတာတွေက ရိုးရာကျင့်စဉ်မို့လို့ လက်ခံရမယ် ဆိုပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက် မျိနိမ့်ကျတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆမျိုးတော့ အယူဆမိဖို့ လိုပါတယ်။ အမျိုးသားတွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ အမျိုးသားဝါဒချည်း၊ အမျိုးသမီးဝါဒချည်း ဆိုတာမရှိသင့်ပါဘူး။ တန်းတူရည်တူပဲရှိသင့်တယ်။ အားလုံးကမွေးရာပါ အရည်အချင်းပါပြီးသားပါ။ သူတို့မှာ လည်း စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်ရှိတယ်။
သတင်းများ အား ပြန်လည်ဝေမျှပေးသော မြစ်မခ မီဒီယာ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
NLD ဦးဆောင်အဖွဲ့သစ်တွင် အမျိုးသမီးအင်အား ထက်ဝက် ပါဝင်....NLD ၏ အနာဂတ် ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ တည်ထောင်လိုသူ ၂၁ ဦးစာရင်း (ကြယ်ပွင့်ပြထားသူများမှာ ၁၉၉၀ ခု ရွေးကောက်ခံ အမတ်များ ဖြစ်သည်။)
ဦးတင်ဦး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးဝင်းတင် စသည့် NLD ပါတီကို စတည်ထောင်သူ သုံး ဦး၊ နောက်တိုး ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်ထဲမှ ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ဦးဟံသာမြင့်၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်မေဝင်းမြင့်တို့ အပါအဝင် ပြည်နယ်/ တိုင်း ၁၃ ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ခေတ်ပျက်သူဌေး မှောင်ခို ဒေါက်တာဘွဲ့အတုဆိုတာ ဖော်ထုထ် နိုင်ပြီ
ဤ သတင်းအား ဖေစ့်ဘုတ် စာမျက်နှာတွင် ခင်ရတနာ မှ ဝေမျှ ပေးသော ကြောင့် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, November 24, 2011 Links to this post
NLD ရွေးကောက်ပွဲဝင်လာမှုနှင့်အတူ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အပြောင်းအလဲတစ်ခု ဖြစ်သွားပြီး လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့်ကိစ္စကြောင့် ထိုအပြောင်းအလဲမှာ ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် အဖြေများလည်း များစွာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်း တစ်ကြိမ်တွေ့ပြီးပြီ။ တွေ့ပြီးတော့ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ သဘောထားတွေကို ပြောခွင့်ဆိုခွင့် တွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ တော်တော်လေးရတယ်။ တချို့အချက်တွေလည်း မတူတာတွေ ရှိတာပေါ့။ အဲဒီတော့ မတူတာတွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ခဏဖယ်ထားကြရအောင်။ တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားပေါ့။ ဘုံအကျိုးစီးပွားအတွက် တူညီတာတွေကို ကျွန်တော်တို့ လက်တွဲပြီးလုပ်ကြရအောင်။ ဒီကနေ့ တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ဆန္ဒက ဘာလဲပေါ့။ ဒီဟာကိုလဲ ကျွန်တော်တို့ ဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်။ တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ဆန္ဒက တိုင်းပြည်က တည်တည် ငြိမ်ငြိမ် အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ လုံလုံခြုံခြုံ ရှိချင်တယ်။ ဒီဟာတစ်ချက်၊ နောက်တစ်ခါ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ချင်တယ်။ ခေတ်မီတဲ့နိုင်ငံ ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်ချင်တယ်။ ဒီနှစ်ချက်က ပြည်သူအားလုံးရဲ့ဆန္ဒပါ၊ ပြည်သူအားလုံးရဲ့ ဆန္ဒဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ခင်ဗျားဆန္ဒလည်း ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်ဆန္ဒလည်း ဖြစ်တယ်။ ဒါကိုခင်ဗျားလက်ခံလားဆိုတော့ သူလက်ခံတယ်။ အဲတော့ ဒီတိုင်းပြည်အကျိုးရှိမယ့်ဟာတွေကို ကျွန်တော်တို့ လက်တွဲပြီးလုပ်ကြရအောင်။ ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း အခု ဒါရွေးကောက်ပွဲတို့ဘာတို့ ပြန်ပြီးတော့ ပါတီကိုမှတ်ပုံတင် ရွေးကောက်ပွဲဝင် ဘာညာ လုပ်တယ်ပေါ့။ ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာ၊ ဘာကိုတွဲပြီးတော့ လုပ်ကြပြုကြမလဲဆိုတာ အခုချိန်ပြောဖို့တော့ ခက်တယ်။ သို့သော်လဲ ပြောနိုင်တာ ကတော့ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးစီးပွားအတွက် ဘုံအကျိုးစီးပွားအတွက်တော့ လက်တွဲပြီးတော့လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ ဒီလိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြောဆိုထားတာတွေ ရှိပါတယ်။
အထက်ပါ စကားကို သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က အင်ဒိုနီးရှားတွင်ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံ စဉ် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ လည်း NLD ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်သည့်နေ့က သူမသဘောထားမှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ စတိသဘော သုံးနေရာမျှဝင်ခြင်းထက် ၄၈နေရာလုံးဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ရာ သမ္မတကြီးနှင့် လူထု ခေါင်းဆောင်အကြား မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ သဘောတူညီချက်တွေ ရည်မှန်းချက်တွေ ရှိနေသည်ဆို မည်သူမျှသိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ သမ္မတကြီး အနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်နိုင်ရန် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေ၊ ပါတီမှတ် ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေကို ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ သမ္မတကြီး၏ ကမ်းလှမ်းမှုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် အပြည့်အဝ တုံ့ပြန်လိုပုံရသည့်အတွက် ၄၈နေရာလုံး ဝင်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသည်မှာ သမ္မတကြီးနှင့် လူထုခေါင်းဆောင်အကြား ယုံကြည်မှုတစ်ခု တည်ဆောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၄၈နေရာလုံး NLD အနိုင်ရရုံမျှဖြင့် လွှတ်တော်တွင် အပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမား ဖြစ်မသွားနိုင်သော်လည်း အစိုးရနှင့် လွှတ်တော်များအတွက် တရားဝင်မှုမှာ ပိုမိုခိုင်မာသွားနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး အားလုံးပါဝင်သော နိုင်ငံရေးဆို သည့် အခြေအနေကိုဖန်တီးမည့် ပထမဆုံး ခြေလှမ်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအုန်းကြိုင်၏ အဆိုအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် အလားအလာရှိနေသည်။ ထိုသို့ လူထုခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့မည်ဆိုသည့်အတွက် အမြင်နှစ်မျိုးရှိလာသည်။ သူမကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်သင့် မဝင်သင့် ဆိုသည့် အခြမ်းနှစ်ခြမ်းဖြစ်သည်။
မဝင်သင့်သည့် အခြမ်းဘက်က လူထုခေါင်းဆောင်သည် ပါတီတစ်ရပ်ကို ကိုယ်စားပြု၍ လွှတ်တော်အတွင်းဝင်ရောက်သွားပါက ပါတီ၏ မူဝါဒကို ကြည့်ရတော့မည်ဖြစ်သည့်အတွက် ပြည်သူနှင့် အခြားပါတီများအတွက် လူထုခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရှိသော သူမမှာ ပါတီတရပ်၏ ခေါင်းဆောင် အဖြစ် လျော့ကျသွားမည်ကို စိုးရိမ်မိကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။ သူမကဲ့သို့ သြဇာရှိသူတစ်ဦးအနေဖြင့် NLD ပါတီခေါင်းဆောင်ဆိုခြင်းထက် ဒီမိုကရက် ပါတီများနှင့် NLD ကို စုစည်း၍ ဦးဆောင်သွားနိုင်သည့် အခြေအနေရှိကြောင်း၊ ထောက်ပြပြောဆိုကြသည်။ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းမှာ ကွန်မြူနစ်များကရော ဦးနုအစိုးရကပါ လေးစားရ သူဖြစ်ရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့်လည်း သူမကို နှစ်သက်သော တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ အခြားဒီမိုကရက်ပါတီများနှင့် NLD ဟူသည့် မတူညီသည့် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများကို ဦးဆောင်သွားနိုင်သည့် အခြေအနေရှိနေပါသည်။
ထို့ပြင် လွှတ်တော်ထဲတွင် သူမကဲ့သို့ အရှိန်အဝါကြီးမားသူတစ်ဦး ထိုင်နေခြင်းကြောင့် ပါတီငယ်များအနေဖြင့် သူမ၏ အရှိန်အဝါကို မကျော်လွန်နိုင်တော့ဘဲ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားပြုမဲဆန္ဒနယ်များ၌ ဖြစ်ပျက်နေသည့် မတူကွဲပြားသည့် ပြဿနာများကို ဆွေးနွေးငြင်းခုန်ရာတွင် ပြဿနာရှိလာနိုင်ကြောင်း ထောက်ပြကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူမအနေဖြင့် လွှတ်တော်ပြင်မှနေ၍ ပြည်သူလူထုနှင့် လွှတ်တော်များကို သြဝါဒ ပေးနိုင် သော နေရာမျိုးကို ယူထားသင့်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
“တစ်အချက်က သူရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရမယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းကို ခံရမယ်။ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်လာမယ်။ လွှတ်တော်ထဲက တင်မြှောက်လို့ရှိရင် ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါကတော့ ပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒပါပဲ”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း ရာထူးပေးနိုင်ခြင်း ရှိ၊မရှိဆိုသည့် မေးခွန်းကို နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်မှ အထက်ပါ အတိုင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်ရာ သူမကို အားကိုးရသည့် လက်ရုံးအဖြစ် သမ္မတကြီးအနေဖြင့် အလိုရှိပုံရသည်ဟုလည်း တွက်ဆနိုင်သည်။ လက်ရှိတွင် သမ္မတအပါအဝင် အစိုးရအဖွဲ့ကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက မဲပေးရွေးချယ်သည်ဖြစ်ရာ လွှတ်တော်ထဲက ပုဂ္ဂိုလ်များကိုသာ အဆို တင်သွင်းကြခြင်းကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါမှ အစိုးရအဖွဲ့တွင် ရာထူးရယူနိုင်မည့်ပုံစံရှိသည်။ သို့ရာတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ လွှတ်တော် ပြင်ပမှ ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း အစိုးရအဖွဲ့တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းမပြုဘဲ ရာထူးခန့်အပ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည့်အချက်ကို စဉ်းစားနိုင်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သူရဦးရွှေမန်း၊ ဦးခင်အောင်မြင့်တို့ကဲ့သို့ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ နှစ်ဦး၊ ပြည်သူ၏ ယုံကြည်ကိုးစားမှုရလာသော သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ကို နိုင်ငံတကာတွင်ရော ပြည်သူလူထုအပေါ်တွင်ပါ သြဇာညောင်းသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်လာခြင်းက နိုင်ငံတကာတွင် မြန်မာ၏ ပုံရိပ်ကို တက်လာစေရုံသာမက ပြည်သူအားလုံး၏ နိုင်ငံရေးနိုးကြားမှု မြင့် တက်လာစေမည်ဆိုသည်ကတော့ သေချာသည့်ကိစ္စ ဖြစ်သည်။
NLD ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးနောက်တွင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားပြီဟု ယေဘုယျဆန်ဆန် ဆိုရမည် ဖြစ်သော်လည်း ယခုချိုးလိုက်သည့် တစ်ဆစ်ချိုးမှာ နောက်ထပ်ချိုးစရာ မရှိတော့ဘဲ ရှေ့တည့်တည့်သို့ တူရှုရမည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုသာ ဖြစ်တော့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဝိဝါဒကွဲပြားမှုတွေ ဖြင့် အပြင်းအထန်ပြိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသော ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများနှင့် ဒီမိုကရေစီဒေါင်ဒေါင်မြည်ကြီးများမှာ ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ က ပြဋ္ဌာန်းသော ရွေးကောက်ပွဲဟူသည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပေါ်သို့ အတူတကွ တက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ရာ ဘုံသဘောတူညီမှုတစ်ခု (သို့) ယာယီပန်းတိုင်တစ်ခုတော့ ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပန်းတိုင်သို့သွားရာတွင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်း ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိသော အမြင်ကွဲပြားမှုမျိုးသာ ရှိတော့မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဖွဲ့တည်း၊ ပန်းတိုင်တစ်ခုတည်း ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည့်အတွက် ဆန့်ကျင်မှုများထက် အပြုသဘောဆောင်သည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ဤ ဆောင်းပါး အား yangon chronicle ဆောင်းပါးကဏ္ဍ မှ ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါသည်.။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် လူငယ်များ၏ အရည်အချင်းများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ သတ်မှတ်ပေးခဲ့
၂၀၁၁ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ရက်နေ့က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(ရုံးချုပ်)တွင် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်များကိုခေါ်ကာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မည့် လူငယ်များ၏ အရည်အချင်းများကို သတ်မှတ်၍ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ချုပ်မှ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် သူများသည် ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများဖြစ်ရမည် ၊ လူငယ်ဖြစ်ရမည် ၊ အမျိုးသမီး ဦးစားပေးမည်၊ ခေတ်ပညာတတ် ဖြစ်ရမည်ဟု အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် များနှင့် တွေ့ဆုံရာ တွင် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါ်ပြီးပြောတာက နံပါတ်တစ် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားကို ဦးစားပေးရမယ် ၊ နံပါတ်နှစ် လူငယ်ဖြစ်ရမယ် ၊ နံပါတ်သုံး အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်ရမယ် ၊ နံပါတ်လေး ခေတ်ပညာတတ်တဲ့လူငယ်တွေကို ပိုလို ချင်တယ် လို့သူပြောသွားတယ် ၊ အဲ့ဒီအချက်တွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုင်းရင်းသားတွေကို ဦးစားပေး စဉ်းစားပေးတဲ့သဘောပေါ့ နောက်လူငယ်လေးတွေကို ဦးစားပေးလာတာပါ” ဟု မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှ အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင် ဦးအေးကြူက ပြောသည်။
အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဥက္ကဌ ဦးတင်ဦးတို့အပါအ၀င် အဖွဲ့ဝင်၂၁ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အန်အယ်လ်ဒီပါတီမှ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့်သူများသည် လူငယ်များဖြစ်ရမည်ဟု ပြောဆိုရခြင်းမှာ လူငယ်များအနေဖြင့် နောင်တစ်ချိန်တွင် တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်မည့်သူများ ဖြစ်စေ ချင်သောကြောင့် ဦးစားပေး ရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များထံမှ သိရသည်။
“အန်တီစု အပါအ၀င် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးကအဖွဲ့ဝင် ၂၁ဦး နဲ့ ပါတီသစ်လျှောက်လွှာတွေအတွက် အန်တီတို့ လက်မှတ်ထိုးကြရတယ် ဒီရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက် ဦးဆောင်မှာက အထွေထွေအတွင်း ရေးမှူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ ဘဘဦးတင်ဦး ၊ ဦးဟန်သာမြင့် နောက် ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့က ဦးဆောင်မှာပါ၊ အားလုံးပေါင်း (၂၁)ဦးပေါ့ ကျန်တဲ့လူက ဗဟိုအမျိုးသမီးအဖွဲ့ပါတယ် ၊ ဗဟိုလူငယ်က တစ်ယောက်ပါမယ် တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်က ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပါတယ် အဲ့ဒီလူတွေကနေမှ နိုင်ငံရေး ပါတီအဖြစ်နဲ့ မှတ်ပုံတင်ဖို့ ဒီနေ့ လုပ်ဆောင်ကြတာပါ” ဟု ရှမ်းပြည်နယ်ကိုယ်စားပြု ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ပါဝင်သူ ဒေါ်ခင်မိုးမိုးက ပြောသည်။
ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းမှ စီစီ ပါတီသစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၊ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအတွက် ဗဟိုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များမှ အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း တို့ကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
သတင်းများပြန်လည်မျှဝေပေးသော မြစ်မခ မီဒီယာ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
ကျွန်တော်တို့NLD ပါတီဝင်အများစုဖြင့်စုစည်းထားသည့် Health Care for Helpless Patients (ဆင်းရဲချို့တဲ့အကူအညီမဲ့နာမကျန်းသူများအား ကူညီစောင့်ရှောက်သူများ)မှ အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လမ်းညွှန်မှုကို ခံယူလျက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးနေရာများတွင် အခမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းများ ဖွင့်ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ထားရာ ကျီစုကျေးရွာအုပ်စုတွင် 21-11-2011 ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ကျီစု အနောက်ကျေးရွာအုပ်စု သဇ္ဇနာရာမရွှေကျင်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဦးဝီရာနန္ဒ၏ သြ၀ါဒကိုခံယူလျက် ဆရာတော်၏ဆွမ်းစားရုံတွင် ယာယီဆေးခန်းကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၄င်းနေ့တွင်ပင် လူမမာမျိုးစုံ 104 ဦးခန့်ကုသပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ပါတီသည် 18-11-2011 ရက်နေ့တွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါသော်လည်း ဆေးကုသသည့် နေ့ရက်မှာပင် SB ကိုကျော်သူရနှင့် ကိုမြင့်ဆွေ၊ (ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)ဦးသန်းစိုး တို့သည်လာရောက်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ် ပါသည်။
ကြံခိုင်ရေးမှဒုစည်းရုံးရေးမှူး တုတ်ကြီး(ခ)မြင့်စိုးနှင့် ရဲကင်းမှူးထွန်းလင်းကျော်တို့သည်ဘုန်းကြီးကျောင်း အနီးမုဆိုးမတစ်ယောက်၏အိမ်သို့ ၀င်ရောက်ကျူးကျော်ကာ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဖြင့် ဓါတ်ပုံများရိုက်ယူ ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ဆေးကုသမှုများပြီး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာပြီးနောက် ကြံ့ခိုင်ရေးစည်းရုံးရေးမှူး ဦးသောင်းတင်နှင့် ဒုစည်းရုံးရေးမှူးတို့သည် ရွာထဲသို့ဝင်ကာ ဆေးကုသခဲ့သောရွာသားများကိုထိန့်လန့်အောင် စုံစမ်းမေးမြန်း ခြိမ်ခြောက် မှုများကိုပြုလုပ်ပါသည်။ ည(၇း၀၀)အချိန်တွင် ဆေးကုသခဲ့ရာတွင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ခဲ့သော ရွာသားကိုရွှေသန်း အား အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုသန်းစိုးမှ စာဖြင့်ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ ကိုရွှေသန်းမှ ရုံးသို့သွားရောက်သောအချိန်တွင် ကြံခိုင်ရေး စည်းမှူး ဦးသောင်းတင်မှ ထပ်မံခြိမ်းခြောက်သတိပေးမှုများပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် NLD ပါတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော ကျွန်တော်တို့ H.C.H.P မှ ရွာခံ ကိုမောင်မောင်အားလည်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကိုသန်းစိုးမှ လူနာစာရင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်အတိအကျကို သူ့အားပြရန် ပြောဆိုခြိမ်းခြောက် ပါသည်။ ရွာထဲတွင်လည်း ဆေးခန်းအားဖွင့်လို့မရအောင်လုပ်ဆောင်မည်ဟု ကြံခိုင်ရေးမှ လိုက်လံဝါဒဖြန့် ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုများလည်းရှိပါသည်။
အထက်ပါအချက်အလက်များကြောင့် အများအကျိုး၊ ပြည်သူ့အကျိုး၊ ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် စိတ်အနှောက်အယှက်၊ အတားအဆီးများ၊ ပိတ်ပင်မှုများ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု များ အောက်ခြေတွင် ပြည့်နှက် နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါ၍ အသိပညာနည်းပါးသောနေရာများတွင် အဆိုပါကိစ္စများကြောင့် ရွာသားများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှောင့်နှေးနေ ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ အများပြည်သူနှင့်တကွ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၊ တာဝန်ရှိသူများ၊ သိသာစေရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, November 23, 2011 Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှ ဆုပေးပွဲသို့ ပေးပို့ သော အမှာစကား
ရွှေသံစဉ်တေးဂီတအဖွဲ့ ထူထောင်သူ၊တေးရေးနှင့်လိဒ်ဂစ်တာတီးသူ ကိုဝင်းမော်မှာ အနုပညာသမား အဖြစ်သာ မက ရွေဝါရောင်သံဃာလှုပ်ရှားမှု တွင်လည်း ပြည်သူကြားမှ သတင်းသမားတယောက်အနေ ဖြင့် ဗီဒီယိုရုပ်ပုံများ ကို တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများဖြင့် ပူးပေါင်းပြီး မီဒီယာသို့ ဖြန့် ဝေ နိုင်ခဲ့သဖြင့် ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ လှုပ်ရှားမှုကို ကမ္ဘာက ပိုမို သိရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုဝင်းမော် ၏ ခံယူချက် နှင့် ဘ၀ တစိတ် တပိုင်းကို အော်စကာဆုပေးပွဲ နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်ခဲ့သည့် ဘားမားဗွီဂျေ မှတ်တမ်းရှပ်ရှင် ထဲတွင် တစိတ်တဒေသ ဖော်ကျူးထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှား ကြိုးပမ်းမှုကို မြန်မာသမ္မတပိတ်ပင်ဟန့်တားမည်မဟုတ်
(The Asahi Shinbum မှ 20 Nov 2011 ရက်စွဲပါ “Myanmar President won’t squash Suu Kyi’s political bid” သတင်းကို yangonchronicle မှ ဘာသာပြန်ဆိုသည်)
မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် တင်မြှောက်ခံရ လိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းပြောဆိုလိုက်ပြီး အကယ်၍ သူမအနိုင်ရရှိခဲ့ပါက သူမ၏ လမ်းကြောင်းတွင် မိမိပိတ်၍ရပ်မည်မဟုတ်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောကြား လိုက်သည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြည်သူတွေက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြမှာပါ။ တကယ်လို့ ဒီလိုလွှတ်တော်မှာ ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်ပြီ ဆိုရင်တော့ သူမအတွက် တစ်စုံတစ်ခုတော့ ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါက ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့အညီပေါ့။” ဟု သမ္မတဦးသိန်းစိန်က အဆာဟိရှင်ဘွန်း အပါအဝင် သတင်းမီဒီယာများကို နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
လာမည့်မတ်လအတွင်း ကျင်းပမည်ဟု မျှော်လင့်ရသော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ NLD ပါတီက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး နောက်တစ်ရက်အကြာတွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က သူ၏ ပထမဆုံး အင်တာဗျူးကို ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ ၅ဝ ခန့်အတွက် ကျင်းပမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် အသက် ၆၆ နှစ်အရွယ် ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြီးခဲ့သော ဩဂုတ် နေပြည်တော်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံစဉ် သူမအား သဘောကွဲလွဲမှု များ ဘေးဖယ်ထားကာ တူညီသော ပန်းတိုင်ကို ဦးတည်လုပ်ကိုင်သွားကြရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟု ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ထိုသို့ တိုင်းပြည်၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် အတူတကွ စတင်လုပ်ကိုင်သွားရန် တောင်းဆိုမှုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်ခံခဲ့သည်ဟု သမ္မတ ကြီးက ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သောမတ်လအထိ တပ်မတော်အစိုးရကို ဦးဆောင်ခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေသည် ယင်းအားမုန်းတီးသော ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက ချစ်ခင်လေးစားသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၁၅ နှစ်နီးပါး အကျယ်ချုပ် ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီး အမျိုးသားနိုင်ငံရေးစနစ်အတွင်း သူမပါဝင်နိုင်ခြင်း မရှိအောင် ပိတ်ဆို့ထားရန် ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့သည်။
ထိုအချိန်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ လက်အောက်တွင် ဦးသိန်းစိန်က ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ သမ္မတ အိုဘားမား ဦးဆောင်သော အမေရိကန်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီသို့ ဦးတည်သည့် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကို ပြုလုပ်လိုက်ပြီဟု ချီးကျူး ပြောဆိုနေပြီဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတိုးတက်မှုရလဒ်များကို သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ကြိုဆိုလိုက်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁-၂ တွင် လာရောက်မည့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်၏ ခရီးစဉ်မှတစ်ဆင့် ဝါရှင်တန်နှင့် ဆက်ဆံမှုများ တိုးတက်လာစေဖို့ ဆန္ဒရှိသည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဟီလာရီကလင်တန်သည် နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်အတွင်း အရှေ့တောင်အာရှ အာဏာရှင်နိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် သွားရောက်သည့် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဖြစ်လာလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ယိုရှီဟီကိုနိုဒါကလည်း နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်က အင်ဒိုနီးရှားတွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရားဝင် ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီပေးမှု ပြန်လည်စတင်ရန် ဂျပန်နိုင်ငံက စီစဉ်နေပြီဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျပန်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဦးသိန်းစိန်က ကြိုဆိုလိုက်ပြီး မကြာမီကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဂျပန်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများ ကြီးထွားလာရန် မျှော်လင့် ကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတည်ပြု
(Associated Press မှ 22 Nov 2011 ရက်စွဲပါ “ Pro- democracy leader Suu Kyi confirms she will stand in Burmese by- election” သတင်းကို yangonchronicle မှ ဘာသာပြန်သည်)
မြန်မာဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လစ်လပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အတွက် ကျင်းပသော လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပြီဟု သိရှိရသည်။
ကာလကြာ အထီးကျန် အပယ်ခံနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးပင်မရေစီးကြောင်းတွင် တရားဝင် ပြန်လည်လှုပ်ရှားရန် သူမ၏ NLD ပါတီက ပြီးခဲ့သော သီတင်းပတ်တွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် သူမ ယခုကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက “သူမသည် မည်သည့်မဲဆန္ဒနယ်ကို ကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ကို မဆုံးဖြတ်ရသေးသော်လည်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားပြီ” ဟု ပြောကြားသည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်နှင့် နောင်ကာလ ရွေးကောက်ပွဲများအတွက် ပြန်လည်မှတ်ပုံ တင်ရန် NLD ပါတီက သောကြာနေ့က ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းသည် မနှစ်က အာဏာရလာသော အရပ်ဖက် အစိုးရသစ်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို လက်ခံယုံကြည်ကြောင်း အချက်ပြ ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ နှစ်ပေါင်း ၅၀ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ယိုယွင်းပျက်စီးလာချိန်၌ စစ်ဖက်အုပ်ချုပ်သူများက ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်၍ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးမည်ဟု ကတိပေးထားသည့်အတိုင်း ကျင်းပပေးခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ယခုအာဏာရ တပ်မတော်ကိုယ်စားပြုပါတီက အနိုင် ရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလအတွင်း တမင်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းခံနေရ သူ နိုဘယ်လ် ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရည်ရွယ်တားဆီး သည့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေကို ယခင်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ယင်းရွေးကောက်ပွဲများကို NLD ပါတီက သပိတ်မှောက်ခဲ့သည်။
သို့သော် ယခုနောက်ဆုံး ထိုဥပဒေကို လက်ရှိအစိုးရသစ်က ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်၍ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဇာတ်ဝင်ခန်းအသစ်များ ထွက်ပေါ် လာပြီဖြစ်သည်။
ယခင်အစိုးရအကျဉ်းသား ဘဝမှ အနာဂါတ်ခေါင်းဆောင် သမ္မတ အဖြစ်သို့
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, November 22, 2011 Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းသည် ၎င်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေနိုင် သည်ဟု ပြောသောစကားကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံး၌ ကျင်းပသော လူငယ်ရေးရာ တာဝန် ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပြည်နယ်/တိုင်း လူငယ်အကူ အညီပေးရေး အဖွဲ့များအစည်းအဝေးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
လူ့ဘဝ၏အရေးကြီးဆုံးကိစ္စမှာ မွေးလာကတည်းကကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေဖို့ပင် ဖြစ်ကြောင်း ဂုဏ်သိက္ခာဆိုသည်မှာ တာဝန်ကျေခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအတွက် ကိုယ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်ဖို့အတွက် ဆိုသောစိတ်များကို ငယ်ငယ်ကတည်း ကဖျောက်ထား ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားသွားသည်။
“ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ် တစ်ယောက် နာမည်ရရေးအတွက် လုပ်တာမဟုတ် ပါဘူးဆိုတာကို ခေါင်းထဲမှာသေသေချာချာထားစေချင်တယ် ” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အားတရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် နောင်လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲများ
တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံး၌ ကျင်းပသော ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးမှ ကန့်ကွက်သူမရှိပဲ ညီညွတ်စွာဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
သတင်းများ ပြန်လည်မျှဝေပေးသော မြစ်မခ မီဒီယာ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဝတ်စားမှုပုံစံ မြန်မာအမျိုးသမီးများ အပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိ
အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဝတ်စား ဆင်ယင်မှု ပုံစံကို သဘောကျ နှစ်သက် ကြသူများတွင် ၄င်းနှင့် ရွယ်တူ အမျိုးသမီးများ သာမက လူငယ် အမျိုးသမီးများပင် ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ "အမေစုက ဘယ်အချိ်န် မြင်ရမြင်ရ မြန်မာဆန်ဆန်ပဲ ဝတ်စား ဆင်ယင်တယ်။
ကျက်သရေရှိအောင် ဝတ်တတ်တယ်။ အရမ်း စမတ်ကျတယ်" ဟု ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်တွင် စီးပွားရေးပညာ မဟာတန်း တက်ရောက်နေသူ မသီသီလွင်က ပြောသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ အရင်တုန်းက လန်ဒန် တက္ကသိုလ် မှာလည်း ကျောင်းသွားတက် ဖူးတယ်လို့သိရပါတယ်။ နောက် နိုင်ငံခြားသားနဲ့ အိမ်ထောင် ကျခဲ့တာတောင်မှ သူဟာ မြန်မာတစ်ဦးဆိုတဲ့ စိတ်၊ မြန်မာပြည်ကို ချစ်တဲ့စိတ်အမြဲတမ်း ရှိနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူနိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းသွားတက်တဲ့ အချိန်တွေမှာရော၊ အိမ်ထောင်ကျတဲ့ အခါတွေမှာရော အရင်တုန်းကဓာတ်ပုံတွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် မြန်မာအဝတ်အစားနဲ့ပဲ တွေ့ရတယ်။ ဂုဏ်ယူစရာလည်း ကောင်းတယ် ဟု ၄င်းကဆိုသည်။ အချို့သူများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝတ်ဆင်သော အင်္ကျီဒီဇိုင်းများ အတိုင်း လိုက်ချုပ်ကြသည်အထိ ရှိသည်ဟု သိရသည်။
အခုနောက်ပိုင်း လိုက်ပြီးချုပ်ကြတာကတော့ ဒေါ်စုဝတ်သလို အရောင်ပြောင်နဲ့ လက်ရှည်ရင်ဖုံးမှာအပေါ်ထောင့်ကြယ်သီးနေရာမှာ ပန်းထည့်ကြတဲ့ပုံ အချုပ်များတယ်။ ရင်စေပုံတော့သိပ်မချုပ်ကြဘူး။ ဒီဇိုင်း ကရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေးပဲလေ။ အသက်၃၀ အရွယ်တွေရော၊နောက်၅၀ကျော်တွေရော အရွယ်မျိုးစုံပါပဲ။ လာအပ်ကြတာ။
ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်တုန်းက လည်း (၁၉၉၀ ကျော်နောက်ပိုင်းမှာ) ဒေါ်စုအဆင်ဆိုပြီး သိုးမွေးအင်္ကျီိုကို ရောင်စုံချိတ်လိုးပုံစံထိုးပြီးဝတ်ဆင်ကြတာ ကြုံဖူးသေးတယ်။ ဟု စမ်းချောင်းမြို့''ဝင်း"စက်ချုပ်ဆိုင်မှ ဒေါ်တင်ခိုင် ကပြောကြားပါသည်။
မြန်မာဆန်စွာ ဝတ်ဆင်သည့် အပြင် ကတ္ထီပါပုံတော် ဖိနပ်သာစီးပြီး ပန်းပန်လေ့ရှိသဖြင့် မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ကျက်သရေရှိသော ဟန်ပန် အပြည့် ရှိသည်ဟု ဂျာနယ်တစ်ခုတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နေသူ အမျိုးသမီးအယ်ဒီတာ တစ်ဦးကဆိုသည်။ "ဒေါ်စု ဝတ်တာက ဘာမှ ဆန်းဆန်းပြားပြားကြီးတွေ မပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ပြည်သူက ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့် သူဝတ်ပုံစားပုံတွေ နေထိုင်ပုံတွေက ပြည်သူတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိတာပါ "။
ဓာတ်ပုံများအား အင်တာနက်စာမျက်နှာများမှ ပြန်လည်ဝေမျှပေးထားပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, November 21, 2011 Links to this post
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ တည်ကြည် ပြတ်သား သောဆုံးဖြတ်ချက်
“အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ဘာပေါ်မှာ အခြေခံလဲဆိုတော့ ကျမတို့ အရေးအကြီးဆုံး ဘာတွေ မြင်လဲဆိုတာ ကျမ တင်ပြသွားပါတယ်၊ သုံးချက်ပါ။ ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေး။ ဒီလို ကြိုးစားနေတာဟာ ကျမတို့ အဖွဲ့ချုပ်အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတို့ ယုံကြည်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုကြီး အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုကြီးကို ထူထောင်သွားနိုင်ဖို့ လုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်လို့ ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ကို ပြန်လည်ပြီးတော့၊ မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်”။
မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ပညာရေးကို မြှင့်တင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း (၉၁)နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေတွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်စေရန်အတွက် ပညာရေးကို မြင့်တင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၂၀၁၁ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံး၌ကျင်းပသော ၉၁ နှစ်မြောက် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသွားသည်။
`လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ကဏ္ဍတွေကို မီးမောင်းထိုးတာတွေရှိကျပါတယ်။ အဲတော့ ကျမက ပညာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးဆက်စပ်မှုကိုပဲ မီးမောင်းထိုးပြီးတော့ ပြောချင်ပါတယ်။ အခု ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာလဲ ကျမတို့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးကိုမြင့်တင်ရမယ်။ ပညာရေးကို မြှင့်တင်ရမယ်ဆိုတာ ဘွဲ့ရတွေအများကြီးမွေးထုတ်ပေးရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး။ ရတဲ့ဘွဲ့တွေဟာ အနှစ်သာရရှိရပါမယ်။ ဘွဲ့ရလာတဲ့ လူငယ်လေးတွေဟာလည်း တကယ့်ပညာတတ်လူငယ်လေးတွေ ဖြစ်ရပါမယ် ´ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ပညာအဆင့်အတန်းမြင့်အောင် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏အရေးကိုကြည့်မည်ဆိုပါက ၎င်းနိုင်ငံ၏ ပညာရေးကို အဓိကထား၍ ကြည့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားသွားခဲ့သည်။
(၉၁)နှစ်မြောက် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ အခမ်းအနားကို ရွှေဂုံတိုင်ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံး၌ နံနက်(၁၀)နာရီမှ စတင်၍ အခမ်းအနား အစီအစဉ်(၈)ရပ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
`အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ဟာ ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ ဇစ်မြစ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လို့ ဒီလိုပဲ ကျမတို့ပြောရမှာပဲ ´ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
၁၉၂၀ခုနှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အက်ဥပဒေ ပြဌာန်းချက်များကို လက်မခံနိုင်ခြင်းကြောင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားထုကြီး ပေါ်ပေါက်လာခြင်း အမျိုးသားကျောင်းများပေါ်ထွန်းလာခဲ့ခြင်း ကိုလိုနီအစိုးရက မြန်မာတိုင်းသူပြည်သားများအား အသပြာပညာရပ်များ သင်ယူခွင့်မရရှိရေးနှင့် အကြားမြင်ဗဟုသုတ နည်းပါးစေခြင်းတို့ဖြင့် ကိုလိုနီစနစ် သက်တမ်းရှည်ကြာအောင်ဖန်တီးခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဒုတိယ ဥက္ကဌဦးတင်ဦးမှ ရှင်းပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ (၉၁)နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့အောင်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံရေးပါတီဝင်များ၊ နိုင်ငံရေးကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ သတင်းထောက်များ အပါအ၀င် လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးသူ ပြည်သူပေါင်း ငါးရာ(၅၀၀) ကျော်ဝန်းကျင်ခန့်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပြန်လည် ဝေမျှ ပေးသော မြစ်မခ မီဒီယာအားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ စုပေါင်းပြီးရွှေည၀ါ စာသင်တိုက်တွင်ပြုလုပ်သည့် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့
နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ ၊တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက်နေ့ မှာ ပြုလုပ်တဲ့ အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကို နိုင်ငံရေးအကျဥ်းသားဟောင်းများ စုပေါင်းပြီး ရန်ကုန်မြို့ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ် နတ်စင်လမ်းထောင့် က ရွှေည၀ါ စာသင်တိုက်မှာ ပြုလုပ်နေကြတာပါ။ပွဲမတိုင်ခင် နိုဝင်ဘာ ၁၉ရက်နေ့ ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေကတည်းက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွှတ်မြောက်ရေးနဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုပွဲကို လဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တက်ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဥ်းသားဟောင်းများက ၀ိုင်းဝန်းစုပေါင်း လက်မှတ်ထိုးကြသလို ရွှေည၀ါ စာသင်တိုက်မှ သံဃာတော်များကလည်း ၀င်ရောက် လက်မှတ်တွေ ထိုးကြတာကို တွေ့ ရပါတယ်။ ဒီနေ့ ပွဲမှာလည်း လက်မှတ်တွေ ၀ိုင်းထိုးကြပြီး နိုင်ငံတော် သမ္မတဆီ ကိုလက်မှတ်တွေ တင်ပြပေးပို.မှာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဥ်းသားလွှတ်မြောက်ရေး၊ ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး၊လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုပွဲကို ၀မ်းတွင်းမြို. မြဘုန်းရှင်ဘုရား၊ မလိုင်မြို. ရတနာဦးစေတီတော်၊မြင်းခြံမြို့ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား၊ လယ်ဝေးမြို့ သမိုင်းဝင်ဆုတောင်းပြည့်ချက်မဘုရားဝန်း။ စစ်ကိုင်းတိုင်းကလေးမြို. ရွှေဘုံသာဘုရားကြီး၊ ဇီးကုန်းမြို. မြသိန်းတန်ဘုရား၊ကချင်ပြည်နယ် မီုးကောင်းမြို. ရွှေသာလျှောင်းဘုရား၊ ညောင်ဦးမြို. ဇေယျာဝတီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းစာသင်တိုက်၊မကွေး မြို.
မကွေးမြသလွန်ဘုရားဝန်း၊မိတ္ထီလာမြို့ ၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို.၊သာစည်မြို. ၊ပျော်ဘွယ်မြို့ ဘုရားငါးဆူဘုရား စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ် ဒေသအသီးသီးတို့ မှာလည်း ဒီမိုကရေစီ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားတဲ့ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် ပြည်သူများစုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲများ ပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, November 20, 2011 Links to this post
လွပ်လပ်သန့်ရှင်းသော တရားရေးမဏ္ဍိုင် ပေါ်ပေါက်စေရန် ဥပ...
သမိုင်းဝင် ပွဲကြီးကို ပါဝင်ကြမဲ့ သူရဲကောင်း အနုပညာ...
NLD ပါတီ ခမောက်အစား ပါတီ၏အလံကို တံဆိပ်အဖြစ် အသုံြး...
NLD ဦးဆောင်အဖွဲ့သစ်တွင် အမျိုးသမီးအင်အား ထက်ဝက် ပ...
ခေတ်ပျက်သူဌေး မှောင်ခို ဒေါက်တာဘွဲ့အတုဆိုတာ ဖော်ထု...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှား ကြိုးပမ်းမှု...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အေ...
ယခင်အစိုးရအကျဉ်းသား ဘဝမှ အနာဂါတ်ခေါင်းဆောင် သမ္မတ အ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဝတ်စားမှုပုံစံ မြန်မာအမျိုးသမီး...
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ တ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ စုပေါင်းပြီးရွှေည၀ါ စ...
သမ္မတဦးသိန်းစိန် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်းသတ...
ဟီလာရီကလင်တန်ကို မြန်မာပြည်သို့ စေလွှတ်မည်ဟု အိုဘား...